ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် (UK)
နိုင်ငံခြားရေးရာ နှင့် ဓနသဟာယနိုင်ငံများရေးရာရုံး
for Uxbridge and South Ruislip (UK Parliament constituency)
for Henley (UK Parliament constituency)
အလက်ဇန်းဒါး ‌ဘောရစ် ဒီ ဖက်ဖာ ဂျွန်ဆင်
(1964-06-19) ၁၉ ဇွန်၊ ၁၉၆၄ (အသက် ၅၇)
Allegra Mostyn-Owen (m. 1987; div. 1993)Marina Wheeler (m. 1993; sep. 2018)
Balliol College, အောက်စ်ဖိုဒ် တက္ကသိုလ်
အလက်ဇန္ဒား ဘောရစ် ဒီ ဖက်ဖာ ဂျွန်ဆင်(အင်္ဂလိပ်: Alexander Boris de Pfeffel Johnson) (/ˈfɛfəl/; ၁၉၆၄၊ ဇွန် ၁၉ တွင်မွေးဖွား)သည် ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးသမား၊ စာရေးဆရာနှင့် သတင်းစာဆရာဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ[မှတ်စု ၁]ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေ၏။ ၂၀၀၈ မှ ၂၀၁၆ထိလန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ ဓနသဟာယနိုင်ငံများရေးရာနှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာ အတွင်းရေးမှူး (တစ်နည်း : နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး)အဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။ ဂျွန်ဆင်သည် ၂၀၀၁ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဟန်လေဒေသ (Henley) အတွက်ပါလီမန်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်ထိUxbridge နှင့် South Ruislip ဒေသတို့အတွက် ပါလီမန်အမတ်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေသည်။ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အားဖြင့် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်ကို နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒသမား (သို့) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသားဝါဒ( one-nation conservative) အဖြစ်ခွဲခြားဖော်ပြကြသည်။
ဂျွန်ဆင်အား နယူးယောက်မြို့ တွင်အထက်တန်းလူလတ်တန်းစား ဗြိတိသျှမိဘများမှမွေးဖွားခဲ့ပြီး အက်တန်ကောလိပ်(Eton College)၊ ထို့နောက် အောက်စ်ဖို့ဒ်ရှိ ဘောလီယိုကောလိပ်(Balliol College) တွင် ၌ပညာသင်ခဲ့သည်။ ဘောလီယိုကောလိပ်၌ ကောလိပ်အဆင့်ဂန္ထဝင်စာဖတ်ခြင်း(Literae Humaniores)လေ့လာခဲ့ကာ ၁၉၈၆၌ အောက်စ်ဖို့ဒ်သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ(President of the Oxford Union) အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
လုပ်ငန်းစလုပ်ကိုင်သည်မှာ တိုမ်းစ် (The Times) သတင်းစာတိုက်တွင်ဖြစ်ပြီး ကိုးကားချက်တစ်ခုကို လိမ်လည်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည်။ ထို့နောက် ဒေးလီး တယ်လီဂရပ်ဖ် (The Daily Telegraph) တွင် ဘရပ်ဆဲလ်သတင်းထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရင်း ၎င်း၏သတင်းဆောင်းပါးများသည် ဗြိတိန်အခွင့်အရေးအရ ဥရောပအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိသော ရပ်တည်ချက်ကို ပိုမိုကြီးထွားစေရန် ဩဇာသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၉ အထိလက်ထောက်အယ်ဒီတာအဖြစ်ရာထူးတိုးပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၅ထိ The Spectator မဂ္ဂဇင်းကိုတည်းဖြတ်ရသည်။ ၂၀၀၁ တွင် ဟန်လေဒေသအတွက် လွှတ်တော်အမတ်အရွေးခံရပြီး မိုက်ကယ်ဟိုးဝပ်ဒ်( Michael Howard) နှင့် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း (David Cameron) ဦးဆောင်သော ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီတွင် အတိုက်အခံအစိုးရအဖွဲ့၏ အငယ်တန်းဝန်ကြီးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အများအားဖြင့် ပါတီ၏ကျောရိုးစည်းမျဉ်းများကို လက်ခံလိုက်နာပြီး ပါလီမန်မဲပေးရာတွင် လိင်တူ/ကွဲအခွင့်အရေး (LGBT)များအတွက် 'ဆိုရှယ်လစ်ဘရယ်လ်' [မှတ်စု ၂]ဝါဒကိုကျင့်သုံးသည်။ ဗြိတိသျှအောက်လွှတ်တော်၌ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်နှုတ်ထွက်၍ ၂၀၀၈တွင် လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်အရွေးခံရကာ ၂၀၁၂တွင်လည်း မြို့တော်ဝန်ထပ်မံ အရွေးခံရ၏။ ၂၀၁၂ လန်ဒန် နွေရာသီ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲကို တာဝန်ယူကာကျင်းပပေးခဲ့ကာ ဘတ်စ်ကားသစ်များမိတ်ဆက်ခြင်း၊ စတန်ဒါစက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်(Santander Cycles)၊ သိမ်းစ်မြစ်ကိုဖြတ်သန်းသည့် မိုးပျံရွေ့လျားကား(Thames cable car)၊ လန်ဒန်မြို့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးများစွာတွင် အရက်သေစာသောက်သုံးမှု တားမြစ်ခြင်းစသည်တို့ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပြထမ်းခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဂျွန်ဆင်သည် Uxbridge နှင့် South Ruislip တို့တွင်အမတ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်တွင်မြို့တော်ဝန်ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သူသည် Brexit (ယူကေနိုင်ငံ ဥရောပယူနီယံမှခွဲထွက်ရေး) အတွက် Vote Leave (ခွဲထွက်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု)တွင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည် ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာ မေ (Theresa May) လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ဓနသဟာယရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်(ဝန်ကြီး) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်နှစ်အကြာ၌ ယူကေ ဥရောပယူနီယံမှခွဲထွက်ရေးအစီအမံ နှင့် အစိုးရ၏စက္ကူဖြူအစီအစဉ် (သို့) (Chequers Agreement])သဘောတူညီချက်အပေါ် ဝန်ကြီးချုပ်မေ၏ ကိုင်တွယ်ချဉ်းကပ်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့ကာ ထိုဝန်ကြီးနေရာမှနှုတ်ထွက်ခဲ့၏။ ၂၀၁၉ ဝန်ကြီးချုပ်မေနှုတ်ထွက်အပြီး ဘောရစ်ကို ကွန်ဆာဗေးတစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လတွင် ဂျွန်ဆင်သည်ပါလီမန်အားစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်အထိ ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက် (၂ )အားအငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသော အကြံပေးခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်မှ တညီတညွတ်တည်းတရားမဝင်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါ။ ထို့နောက် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (ရှောင်တခင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟုလည်းခေါ်ဝေါ်သည်။)၌ ၁၉၈၇မှ စ၍ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ် ဂျွန်ဆင်မှာ အနိုင်ရခဲ့ကာ ၁၉၇၉ကတည်းက မည်သည့်ပါတီမဆိုရရှိသော မဲအရေအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကို အများဆုံးရခဲ့သည်။ အချိန်ဇယားအရ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၃၁ အချိန်တွင် ဥရောပယူနီယံမှ (European Union) မှ ဂျွန်ဆင်၏ စေ့စပ်ထားရှိသော နှုတ်ထွက်မှုသဘောတူညီချက်မူများ(Brexit withdrawal agreement)အောက်တွင် ထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။
ဂျွန်ဆင်သည် ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေး နှင့် သတင်းမီဒီယာလောကတွင် အငြင်းပွားဖွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်၏။ မူလကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီထောက်ခံအားပေးသူများကိုပါ ကျော်လွန်၍ ဖြန့်ကျက်နိုင်သော ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအရည်အသွေးတစ်ရပ်နှင့်အတူ ဖျော်ဖြေနိုင်သော၊ ဟာသဆန်သော၊ လူကြိုက်များသော ပုံရပ်ရှင်အဖြစ် ၎င်းကို ထောက်ခံအားပေးသူများက ချီးကြူးထောပနာပြုကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လည်း ၎င်းကို မနှစ်မြို့ဝေဖန်သူများက မရိုးသားသော၊ အထက်တန်းဆန်သော၊ ကရိုနီဆန်သော၊ ရိုင်းပြသောစကားလုံးများကို သုံးဆွဲသူ အဖြစ် စွပ်စွဲကြလေသည်။ ဂျွန်ဆင်မှာ အတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ချို့ နှင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ဖော်ကြူးမှုများ၏ အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်နေပေသည်။
၁.၂ အက်တန်ကောလိပ် နှင့်အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်(၁၉၇၇-၁၉၈၇)
၂.၁ ' တိုမ်းစ် နှင့် ဒေးလီ တယ်လီဂရပ်ဖ်သတင်းစာများ ၁၉၈၇-၁၉၉၄
၂.၂ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင်: ၁၉၉၄–၁၉၉၉
၂.၃ The Spectator မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဟန်လေနယ် အမတ်: ၁၉၉၉-၂၀၀၈
၂.၃.၂ ဒုတိယ သက်တမ်း
၃.၁ မြို့တော်ဝန် ရွေးချယ်ခြင်း: ၂၀၀၇–၂၀၀၈
၃.၂ မြို့တော်ဝန် ပထမသက်တမ်းနှင့် အထွေထွေ : ၂၀၀၈–၂၀၁၂
၃.၃ ပြန်လည်အရွေးခံယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် ဒုတိယသက်တမ်း : ၂၀၁၂-၂၀၁၆
၄ ပါလီမန်သို့ ပြန်လာခြင်း
၄.၁ ဘရက်ဇစ် လှုပ်ရှားမှု : ၂၀၁၅-၂၀၁၆
၄.၂ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး : ၂၀၁၆–၂၀၁၈
၅.၁ ဘရက်ဇစ် မူဝါဒ
၅.၂ အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် အထွေထွေ
၅.၃ ၂၀၁၉ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
ဂျွန်ဆင်ကို နယူးယောက်မြို့ မဟတ္တန်အထက်ပိုင်း၏ အရှေ့ခြမ်းတွင် ၁၉၆၄ ဇွန် ၁၉တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။  ဖခင်နှင့်မိခင်မှာ စတန်လေ ဂျွန်ဆင်(ထိုစဉ်က ၂၃နှစ်ရှိ၍ နောက်တွင် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်တွင် စီးပွားရေးပညာတက်ရောက်)နှင့် သျှားလတ် ဖောစက် (၂၂နှစ်အရွယ် ပန်းချီဆရာမ၊ဖခင်မှာ ရှေ့နေ ဆာ ဂျိမ်းစ် ဖောစက်)တို့ဖြစ်ကြပြီး  ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ ၁၉၃၆တွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးနောက် အမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်။၁၉၆၄ စက်တင်ဘာတွင် အင်္ဂလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ကာ ၁၉၆၅၌ သမီးဖြစ်သူ Rachel ကိုဖွားမြင်သည်။  ၁၉၆၆တွင် အမေရိကန် ဝါရှင်တန်မြို့တော်သို့ ရွှေ့ပြောင်းပြန်ကာ စတန်လေမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင်အလုပ်ရရှိသည်။ တတိယမြောက်ကလေး Leoကို ၁၉၆၇ စက်တင်ဘာတွင်ဖွားသည်။ ၁၉၆၉တွင် အင်္ဂလန်သို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ကြသည်။ ဂျွန်ဆင်မှာ ကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ်နေတတ်၍ ကြိုးစားမှုရှိသည်။ နားလေးခြင်းရောဂါကိုခံစားရကာ နားစည်အတွင်းပိုင်းသို့ grommet ခေါ်ပြွန်သေးတစ်ချောင်းဖြင့် အစားထိုးခွဲစိတ်မှုပြုခဲ့ရသည်။ ဂျွန်ဆင်တို့မောင်နှမများကို ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကိုအာပေးခဲ့ကြသည်။  ၎င်းကလေးဘဝ၏ အစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောရည်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာ့ဘုရင် (world king) ဖြစ်ရန်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၇၁နှောင်းပိုင်းတွင် စတုတ္ထမြောက်ကလေးဖြစ်သည့် Joseph ကို မွေးဖွားသည်။  ဖခင်စတန်လေ ဥရောပကော်မရှင်တွင် အလုပ်အကိုင်တည်မြဲပြီးနောက် ယုကယ်မြို့နယ် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ (Uccle, Brussels)သို့ ၁၉၇၃ ဧပြီတွင် မိသားစုကိုပြောင်းရွှေ့ကာ ဂျွန်ဆင်သည် ဘရပ်ဆဲလ်အမှတ်(၁) ဥရောပကျောင်းသို့တက်ရောက် ပြင်သစ်စကားသင်ကြားသည်။  ရပ်ဂ်ဘီအားကစား(rugby)အပေါ်နှစ်သက်လာပြီး ရှေးဟောင်းဂရိနှင့် လက်တင်စာပေများတွင်ထူးချွန်သည်။ ၁၉၇၈ ဒီဇင်ဘာတွင် မိဘနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်၍ ၁၉၈၀တွင်ကွာရှင်းကြသည်။မိခင်ဖြစ်သူနှင့် သားသမီးများလိုက်နေ၏။
ကလေးတုန်းကပေါ့ ကျွန်တော်ဟာ အဖုအပိန့်အစက်တွေဗလပွနဲ့ ပြီးတော့ အတော့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား စာပဲထိုင်လုပ်နေတဲ့ စာဂျပိုးပဲ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကတော့ လန်ဒန်ကိုဖြတ်ပြီး မြေအောက်ရထားနဲ့ ဗြိတိသျှပြတိုက်ကိုသွားတာပဲဗျ။ စာရေးဆရာ - ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်
ဂျွန်ဆင်သည် ကင်းကျောင်းမှ ပညာသင်ဆုရ၍ အက်တန်ကောလိပ်တွင်ပညာသင်ကြားခွင့်ကာ ထိုကောလိပ်မှာ ဘာ့ခ်ရှိုင်းယားက ဝင်ဆာအနီး အထက်တန်းစား ပုဂ္ဂလိကဘော်ဒါကျောင်းမျိုးဖြစ်သည်။  ၎င်း၏ပထမနာမည် အဲလက်စ်အစား ဘောရစ်ဆိုသည့် စကားလုံးကိုစတင်သုံးစွဲ၍ သမားရိုးကျမဟုတ်သော အင်္ဂလိပ်စာ/စကားအရည်အသွေးကိုပျိုးထောင်ခဲ့ကာ ဤအချက်ကြောင့်ပင် သူသည် လူသိများကျော်ကြား၏။ မိခင်၏ ကသလစ်ခရစ်ယာန်ကို(Catholicism) စွန့်ခွာပြီး အိန်ဂျလစ်ကန်ခရစ်ယာန်(Anglican)ဖြစ်လာသောအခါ အင်္ဂလန်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး(the Church of England)တက်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ဂန္ဓဝင်စာပေတွင်တော်သောကြောင့် နှစ်ဘာသာစလုံးတွင်ဆုများရရှိကာ  The Eton College Chronicleဟူခေါ်သော ကျောင်းသတင်းစာတွင် အယ်ဒီတာ၊ ကျောင်းစကားရည်လုပွဲအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာသည်။ အက်တန်ကျောင်းမှထွက်ပြီး ကြားတစ်နှစ်တွင် ဩစတေးလျသို့သွားကာ Outward Boundအဖွဲ့အစည်းမှ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးထားသော Geelong Grammaကျောင်းကြီးပရဝုဏ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းစားပုဂ္ဂလိကပိုင် Timbertopကျောင်းတွင် အင်္ဂလိပ်နှင့် လက်တင်ဘာသာရပ်များသင်ကြားခဲ့သည်။ 
ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဂန္ဓဝင်စာပေဖတ်ရှုခဲ့သော အောက်စ်ဖို့ဒ်၊ ဘောလီယိုကောလိပ်
ဂန္ထဝင်အတွေးအခေါ်များ၊ ရှေးဟောင်းစာပေ၊ ဂန္ထဝင်စာပေစသည်တို့ကို လေ့လာသင်ကြားရန် လေးနှစ်သင်တန်းသင်ရိုးဖြစ်သော (Literae Humaniores)ကို ဘောလီယိုကောလိပ်၌ တက်ရောက်ရန် ပညာသင်ဆုရခဲ့၏။ ၁၉၈၃နှောင်းပိုင်းတွင် ထိုကောလိပ်အောင်မြင်ပြီး ဂျွန်ဆင်သည် နောက်ပိုင်း၌ ဗြိတိသျှနိုင်ငံရေးနှင့် သတင်းမီဒီယာလောကကို ၂၁ရာစု၏ ဒုတိယဆယ်စုနှစ်များတွင် လွှမ်းမိုးနိုင်သောအောက်စ်ဖို့ဒ်ကောလိပ်အဆင့်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသော ထိုသူတို့မှာ ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း၊ ဝီလီယန် ဟေးဂ် (William Hague)၊ မိုက်ကယ် ဂို့ဗ် (Michael Gove)၊ ဂျရမီး ဟန့်တ် (Jeremy Hunt)၊ နစ်ဘိုးလ်စ် (Nick Boles) တို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်အကြီးတန်းပါတီဝင်နိုင်ငံရေးသမားများလည်းဖြစ်ကြသည်။ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တွင် ရေပန်းစားထင်ရှားသည်။ ဂပ်ပီ(Guppy)နှင့်အတူ တက္ကသိုလ်၏ သရော်သောမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည့် Tributaryကို ပူးတွဲတည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄တွင် အောက်စ်ဖို့ဒ် သမဂ္ဂတွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရကာ သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရန်လှုပ်ရှားသည်။ အချိန်အတော်ကြာသည်အထိမအောင်မြင်ပဲ ၁၉၈၆တွင်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
' တိုမ်းစ် နှင့် ဒေးလီ တယ်လီဂရပ်ဖ်သတင်းစာများ ၁၉၈၇-၁၉၉၄[ပြင်ဆင်ရန်]
ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ ရှိနေခဲ့ရတာဟာ အရမ်းကောင်းတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလင်တံတိုင်းပြိုလဲတော့ ပြင်သစ်တွေ၊ဂျာမနီတွေဟာ ဒီအဖြစ်သနစ်ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲ၊ ဥရောပကြီး ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရတယ်။ ဒီသမိုင်းဝင် ဂျာမန်ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုရှာဖွေဖို့၊ စနစ်တကျစုစည်းထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသောလူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ရပ်ကိုတည်ထောင်ဖို့ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ ဖိအားတွေရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီအချက်ကပဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကို ပူပင်မှုတွေဖြစ်စေလာခဲ့တယ်။ ဘရပ်ဆဲလ်ကနေ ရေးသမျှအကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ဘာတွေ့သလဲဆိုရင် ခြံတံတိုင်းကြီးကိုကျော်ပြီး ဒီကျောက်ခဲတွေလွှင့်ပစ်တာမျိုး။ ကျောက်ခဲတုံးတွေကျလာတော့ အံ့ဖွယ်ဝုန်းကနဲခွမ်းကနဲအသံတွေကို အင်္ဂလန်ရဲ့ ဟိုဘက်ဘေးနားက ဖန်လုံအိမ်ထဲကနေနားထောင်နေတာပေါ့။ ဘရပ်ဆဲလ်က အခုရေးနေသမျှတွေမှာ တိုရီပါတီအပေါ် ဒီထူးဆန်းပေ့ ပေါက်ကွဲမှုအကျိုးဆက် အရာထင်လာတာတွေပါတယ်။ ဒါကပဲ ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်း အတော်လေးရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့(ထူးဆန်းသော) သိရှိနားလည်မှုစွမ်းအားတွေ ကျွန်တော့်ကိုပေးခဲ့တာ။ စာရေးဆရာ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်
၁၉၈၇ စက်တင်ဘာတွင် ဂျွန်ဆင်နှင့် မို့စ်တန် အိုဝင်တို့ ရှရော့ရှိုင်းယား၊ ဝက်စ် ဖက်ဘ်တန်တွင် (West Felton, Shropshire)လက်ထပ်သည်။ ဂျာမန်တေးရေးဆရာHans Werner Henzeမှ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အထူးစပ်ပေးထားသော တယောသေးနှင့်အလတ်နှစ်ခုတွဲဖြင့် တီးခတ်သည့် AllegraeBorisတေးသွားဖြင့် လက်ထပ်ပွဲတွင်တီးခတ်ခဲ့ကြသည်။  မိသားစုအဆက်အသွယ်ဖြင့် တိုမ်းစ်သတင်းစာတွင်(The Times)ဘွဲ့ရအလုပ်သင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယမြောက် အက်ဒ်ဝပ်ဘုရင်နန်းတော်ရာကို ရှေးဟောင်းသုသေသနဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအကြောင်းဆောင်းပါးရေးရာတွင် အကိုးကားတစ်ခုကို လုပ်ကြံပြောဆိုရာ၌ ၎င်း၏ခေါင်းကိုင်ဖခင်(godfather) သမိုင်းပညာရှင် ကောလင်းလူးကပ်စ် (Colin Lucas)ဟု မှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သဖြင့် မကောင်းသတင်းထွက်ခဲ့၏။ အယ်ဒီတာချားလ်စ် ဝီလ်ဆန်သိသဖြင့် ရာထူးမှထူတ်ပယ်ခဲ့၏။ အောက်စဖို့ဒ် သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စဉ် ဒေးလီးတယ်လီဂရပ်ဖ်အယ်ဒီတာ မက်စ် ဟတ်စတင်းစ်(Max Hastings)ကို တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ထိုသတင်းစာတိုက်(The Daily Telegraph)တွင် ဦးဆောင်ရေးသားသောအဖွဲ့၌ အလုပ်ကိုင်မြဲခဲ့၏။ ၎င်းဆောင်းပါးများသည် အင်္ဂလန်အလယ်ပိုင်း သက်လတ်၊ အထက်တန်းစား ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖတ်ရှုသူများအဖို့ စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ကာ ၎င်း၏ ထင်ရှားစေသည့် စာပေဟန်၊ ရှေးစကားလုံး စကားစုများ ခပ်များများသုံးစွဲခြင်း၊ စာဖတ်ပရိသတ်ကို သူငယ်ချင်းအပေါင်းရောင်းရင်းများ(my friends) ဟု ပုံမှန်သုံးစွဲသဖြင့် နာမည်ရလာသည်။ ၁၉၈၉ အစောပိုင်းတွင် ဂျွန်ဆင်အား ဘရပ်ဆဲလ်တိုက်ခွဲတွင် ဥရောပကော်မရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးသားရန် ခန့်အပ်သည်။  ၁၉၉၄ထိ ထိုရာထူးတွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်။ 
ဥရောပပေါင်းစည်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဂျက်ကွက်စ် ဒီလာ(Jacques Delors)ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတစ်ခုဖြင့် သူသည်ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၏ ဥရောပသမဂ္ဂအပေါ်အယုံကြည်မရှိသော သတင်းထောက်အနည်းအကျဉ်းထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။. ဥရောပသမဂ္ဂအပေါ်ယုံကြည်ထောက်ခံသူ တိုရီပါတီဝင် ခရစ်ပတ်တန်(Chris Patte)က နောက်ပိုင်းတွင်ယခုလိုပြောကြားခဲ့၏။ အဲဒီတုန်းက ဂျွန်ဆင်ဟာ သတင်းတုသတင်းယောင်လုပ်တတ်တဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးသော သူတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲ။ နောက်ပိုင်း ဂျွန်ဆင်၏အထုတ္တုပ္ပတ္တိရေးသားသူ ဆိုနီယာ ပါးနဲလ်(Sonia Purnell ) (ဂျွန်ဆင်၏ ဘရပ်ဆဲလ်သတင်းစာတိုက် လက်ထောက်)က  သူဟာလက်ယာဘက်သမားတွေအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂအပေါ်အယုံကြည်မရှိဝါဒကို လှလှပပ စိတ်ညို့အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပဲ့တင်ထပ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ အရင်ကဆို လက်ဝဲယိမ်းသမားတွေနဲ့ပဲ ဒီဝါဒက ပတ်သက်ခဲ့တာ ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆင်၏ဆောင်းပါးများသည် ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးချုပ် မာဂရက်သက်ချာကို အကြိုက်တွေ့စေ၍ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အကြိုက်ဆုံး သတင်းသမားဖြစ်လာသည်။ ဂျွန်ဆင်၏ ဆောင်းပါးများသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီအကြား ဥရောပသမဂ္ဂအပေါ်ထောက်ခံသူနှင့် အမြင်မကြည်သူအဖွဲ့များကြားတင်းမာမှုများဖြစ်စေခဲ့ကာ ၁၉၉၇ ပါတီရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်သောအခါ ဂျွန်ဆင်သည် များစွာသောပါတီဝင်များ၏ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းခံရလေသည်။ ၁၉၉၃တွင် ဇနီးသည် အယ်လီဂရာနှင့်ကွာရှင်းသည်။  ၁၉၉၃ မေတွင် ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မာရီနာ ဝီးလာနှင့်လက်ထပ်၏။ များမကြာမီ မာရီနာမှာ သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားသည်။ အစ်စ်လင်းတန်တွင်နေထိုင်စဉ် နောက်ထပ်ကလေးသုံးယောက် ထပ်ရ၏။ အားလုံး၏ ပထမအမည်ကို ဂျွန်ဆင်ဝီးလာ ဟူ၍ပေးထား၏။
လန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်လသည့်အခါ ဟတ်စတင်း(ဒေးလီးတယ်လီဂရပ်အယ်ဒီတာ)သည် ဂျွန်ဆင်၏ စစ်ပွဲရေးရာသတင်းထောက်(war reporter)ဖြစ်ရန် တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ထိုရာထူးအစား ၎င်း၏လက်ထောက်အယ်ဒီတာနှင့် အဓိကနိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင်ရာထူးသို့တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးသဘောရေးရာစွယ်စုံရခြင်းနှင့် သိသာထင်းရှားစွာရေးသားနိုင်မှုတို့ကြောင့် ဂျွန်ဆင်၏ကော်လံမှာ ချီးကျူးခြင်းခံရသည်။ သတင်းစာများဘာတွေပြောနေသလဲ(The Papers Say the Award)ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာ၏မှတ်ချက်ပြုရေးသားသူဆု(Commentator of the Year Award)ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏အရေးအသားပုံစံကို ဝေဖန်ရေးသမားများက တစ်ယူသန်ဆန်လှသည်ဟု ရှုတ်ချကြသည်။ ဆောင်းပါးကော်လံအများပြားတွင် တွင်သူသည်အာဖရိကန်လူမျိုးများကိုရည်ညွှန်းရာ၌ လူမည်းကောင်လေးများ (piccannies, Wiktionary:my:pickaninny)” နှင့် ဖရဲသီးအပြုံးများ(watermelon smiles, Wiktionary:my:watermelon stereotype)ဟူသောစကားလုံးများကိုသုံးခဲ့သည်။ ယူဂန်ဒါရှိ ဥရောပ၏ကိုလိုနီဝါဒကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ လိင်တူအမျိုးသားများကို စွပ်ကျယ်ဝတ် ဟိုဟာလုပ်စားတဲ့ကောင်လေးများ ("tank-toped bumboys") ဟုရည်ညွှန်းသုံးစွဲသည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျွန်မေဂျာသည် ဂျွန်ဆင်ကို မနှစ်သက်၍ ၎င်းပါတီဝင်အဖြစ် အရွေးခံရာတွင် တားဆီးရန်စဉ်းစားခဲ့သည်
ရွေးချယ်ထားသော နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအပေါ် အသေအချာစဉ်းစားသုံးသပ်ရင်း ၁၉၉၃အရောက် ၎င်း၏ဆန္ဒဖြစ်သော ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်၍ ၁၉၉၄ယူကေအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန် အမတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အမတ်ဖြစ်လိုသည်ဟုအကျဉ်းဖော်ပြခဲ့သည်(Member of the European Parliament - MEP)။ အန်ဒရူးမစ်ချယ် (Andrew Mitchell)က ဝန်ကြီးချုပ် မေဂျာကို ဂျွန်ဆင်၏ အမတ်ဝင်ရွေးခြင်းကို မတားမြစ်ရန်နားချသည်။ သို့သော် ဂျွန်ဆင်မှာ ရွေးကောက်ခံနယ်မြေ (မဲဆန္ဒနယ်) ရှာမရခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်း Clwyd South နယ်အတွက်ပါတီ၏ ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်၍ ထိုနယ်မြေမှာ ထိုစဉ်က လေဘာပါတီ၏ အပိုင်စားနယ်မြေဖြစ်ရာ ၁၉၉၇ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေဘာပါတီဝင်အားရှုံနိမ့်ခဲ့၏။
တခြားသတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စတစ်ခုကို ၎င်းမိတ်ဆွေ ဒဲရီးယက်စ် ဂပ်ပီနှင့် တယ်လီဖုန်းပြောကြားသည်ကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခံရသောအခါ ၁၉၉၅ ဇွန်တွင် ဂျွန်ဆင်၏ မကောင်းသတင်းအနံ့ထွက်ခဲ့သေးသည်။ ဟတ်စတင်းစ်က သိ၍ ဂျွန်ဆင်အားအပြစ်ပေးသော်လည်း အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ The Daily Telegraph ၏ အခြားထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သော The Spectatorတွင်ပုံမှန် သတင်းကော်လံရသည်။
ဘီဘီစီ၏ လက်ရှိဖြစ်ရပ်များကိုသရော်လှောင်ပြောင်သော အစီအစဉ်တွဲ(Got News for You)၏ ၁၉၉၈-ဧပြီ-အခန်းတွင် ပါဝင်လာကာ ၎င်း၏ လုံးလုံးထွေးထွေးစကားပြောတတ်သောပုံစံကြောင့် နိုင်ငံတဝှမ်းလူသိထင်ရှားဖြစ်လာသည်။ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်က ဖျော်ဖြေမှုပေးအတော်လေးပေးနိုင်သည်ဟု မြင်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်များတွင်လည်း ဖိတ်ခေါ်ခံရ၍ ဧည့်သည်တင်ဆက်သူအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သေး၏။ 
The Spectator မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဟန်လေနယ် အမတ်: ၁၉၉၉-၂၀၀၈[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၉ ဇူလိုင်၌ ဂျွန်ဆင်အားသူ၏ပါလီမန်ရည်မှန်းချက်များကိုစွန့်လွှတ်မည်ဆိုက The Daily Telegraph and The Spectator ပိုင်ရှင် ကောန်ရက်ဒ် ဘလက် (Conrad Black)က The Spectator၏ အယ်ဒီတာလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းရာ ၎င်းကသဘောတူခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆင် အယ်ဒီတာလုပ်စဉ် မဂ္ဂဇင်းမှာ (ရောင်းအား ၁၀%တက်လာ၍) စောင်ရေ ၆၂၀၀၀ အထိတိုးလာသည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းလည်းရလာ၏။ ၎င်းအယ်ဒီတာလုပ်ဆောင်မှုအား ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။ The Spectatorသည် တကယ့်အရေးကြီးကိစ္စများကိုလက်ရှောင်သည်ဟု တစ်ချို့ကဆိုသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူသည် ရုံး၊ အစည်းအဝေးများနှင့်ပွဲများ ပုံမှန်ပျက်ကွက်လာခြင်းကြောင့် စိတ်တိုကြသည်။ မဂ္ဂဇင်း၌တလွဲနိုင်ငံရေးခန့်မှန်းချက်များကြောင့် နုံခြာသောနိုင်ငံရေးပါရဂူကြီးဟု နာမည်ဆိုးရလာခဲ့သည်။ The Spectatorဆောင်းပါးရှင် တက်ကီ သီယာဒေါရကပလ(စ်)(Taki Theodoracopulos)အား လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု နှင့် ဂျူးလူမျိုးများအပေါ်အမုန်းပွားစေသော စကားလုံးများထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အတွက် သူ့ယောက္ခမချားလ်စ်ဝီလာအပါအဝင် အတော်များများက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြ၏။
ဂျာနယ်လစ် ရှားလက် အက်ဒ်ဝပ်(Charlotte Edwardes) က ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင်ဂျွန်ဆင်သည် Spectator ၏ရုံးခန်းထဲ၌သီးသန့်နေ့လယ်စာ စားချိန်ဝယ် သူမ၏ပေါင်ကိုညှစ်သည်ဟု ၂၀၀၉၌ စွပ်စွဲသည်။ နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလည်းသူမအားအလားတူမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့ရာ ဒေါင်းနင်းလမ်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထိုစွပ်စွဲချက်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ရောမသားတို့ အိပ်မက်များ ဟုခေါ်သော ရောမအင်ပါယာအကြောင်းရေးသားထားသည့် ၂၀၀၅ခုထွက်စာအုပ်၏ နောက်ပိုင်းထုတ်ဝေသည့်ရိုက်နှိက်ချက်နောက်ဆက်တွဲတွင်ဂျွန်ဆင်က အစ္စလာမ်ဘာသာသည်မွတ်စလင်ကမ္ဘာအား အနောက်ဘက်(ဥရောပကိုဆိုလို)တွင် "ရာစုနှစ်များစွာနောက်ကျစေခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရ၏။
Boris Johnson ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် နွမ်းလျှဖွယ်ရာ လတ်တလောနိုင်ငံရေး၏ကိစ္စများအပေါ် ထင်ရှားကျော်ကြားသူများအတွက် တိုရီ(Tory) ပါတီ၏ ပျော့ကွက်များကို ပိုမိုဖြစ်စေ၏။ အရည်အသွေးများရှိသော်လည်း ဂျွန်ဆင်သည် အနာဂတ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည့် တိုရီပါတီအစိုးရအဖွဲ့အတွက် ကောင်းမွန်စွာအကျိုးပြုနိုင်မည်မဟုတ်လောက်။ တစ်ကယ်ကိုပဲ လေးနက်သောမူဝါဒရေးရာများအပေါ်အလွန်အကျွံစိတ်ဝင်စားနေခြင်းကြောင့် ဂျွန်ဆင်ဟာ လူသိလာမှာမဟုတ်သလို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးအတွက် အထင်မရှား၊ကြိုးစားသောအငယ်တန်းဝန်ကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးရာအသေးစိတ်ကို စမ်းတဝါးဝါးတူးဆွရှာဖွေနေသော ဂျွန်ဆင်ကို မြင်တွေ့ဖို့လည်းခက်ပေမည်။ သူ့ရဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းရန် ကာတွန်းဇာတ်ကောင် Bertie Wooster ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုရှိသည်။ "တစ်ခြားသူတစ်ယောက်လို ဟန်ဆောင်တုပခြင်းသည် တစ်ကယ့်လူဖြစ်စေ၏ ဒီအချက်ကိုတော့ သံသယရှိစရာမလိုဘဲ ဂျွန်ဆင်က ပိုကောင်းအောင်ပြင်ပြပါလိမ့်မယ်"" (စာရေးဆရာ - Max Hastings) London Evening Standard
မိုက်ကယ် ဟက်ဆယ်လ်တိုင်း(Michael Heseltine)အနားယူပြီးနောက် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ အခိုင်အမာနယ်ဖြစ်သော အောက်စဖို့ဒ်၊ ဟန်လေနယ်မြေ၏ အမတ်လောင်းဖြစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်ချို့ပါတီဝင်များကနှစ်သက်၍ တစ်ချို့က ၎င်း၏အလေးအနက်မထားခြင်း၊ ဒေသအပေါ် ဗဟုသုတမရှိခြင်းအတွက် မနှစ်မြို့ကြပေ။ ၂၀၀၁ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အများစုမဲ၈၅၀၀ဖြင့်နိုင်ခဲ့သည်။
ပါလီမန်တွင် ဂျွန်ဆင်အား ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဥပဒေကြမ်းများကို လုပ်ဆောင်ရသော အမြဲတမ်းကော်မတီတွင် နေရာရသည်။ သို့သော် အစည်းဝေးအတော်များများမတက်မိဘဲ လွတ်သည်။ လူသူရှေ့ စကားပြောသူအဖြစ် သင့်လျော်သောအရည်အချင်းရှိလည်းပဲ အောက်လွှတ်တော်တွင်ပြောသော စကားများမှာ အသက်မပါလှဟု အများကဝေဖန်ရာ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုသူတို့ကို မစင်ကောင်များဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ မထောက်ခံပါဘူးဟု အစောပိုင်းပြောသော်လည်း ၂၀၀၃အီရတ်စစ်ပွဲကို အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရန် ယူကေပါဝင်မည့်အရေးအားမဲပေးခဲ့၏။ ၂၀၀၄ ဩဂုတ်လတွင် လေဘာဝန်ကြီးချုပ် တိုနီဘလဲကို စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ရာဇဝတ်မှု ကြီးငယ်ကျူးလွန်သည်ဟု ရာထူးမှဖယ်ရှားရန် မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများတွင် ထောက်ခံခဲ့၏။ 
လွှတ်အမတ်မဖြစ်ဖို့ ကတိစကားချိုးဖောက်သောကြောင့် သူ့အား လူလိမ်ဟူ၍ တံဆိပ်တပ်သော်လည်း ဘလက်မှာ မဂ္ဂဇင်းစောင်ရေတိုးစေရန်ကူညီထားသော ဂျွန်ဆင်ကို အလုပ်မဖြုတ်ခဲ့ပေ။ 'The Spectatorအယ်ဒီတာဆက်လုပ်ရင်း The Daily Telegraph and GQ တို့အတွက် သတင်းများရေးသားကာ တီဗီပေါ်တွင်လည်းပါလာတတ်သည်။စာအုပ်များရေးသားထုတ်ဝေသည်။ ၂၀၀၄၌ ပထမဆုံးလုံးချင်းဝတ္ထုဖြစ်သည့် ၇၂ အပျိုစင်များ : အလွဲများ၏ ဟာသ(Seventy-Two Virgins: A Comedy of Errors)ကို ထုတ်ဝေသည်။ အလုပ်ပေါင်းစုံအောင်လုပ်သည်ဟု ဝေဖန်ရေးသမားများကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ဝင်စတန် ချာချီ နှင့် ဘင်ဂျမင် ဒစ်(စ်)ရေးလီ ကို ကိုးကားကာ ၎င်းဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးမှာလည်း စာပေပိုင်းရော နိုင်ငံရေးပိုင်းပါလုပ်ကိုင်ကြသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ စိတ်ဖိဆီးမှုများကို ကျော်လွှားရန် စက်ဘီးစီးသည်။ အနှေးပြေးသည်။
၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာတွင် တက်ဘလွိုက်သတင်းစာများက ထုတ်ဖော်ရေးသားသည်မှာ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ကတည်းက ဂျွန်ဆင်နှင့်Spectator ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော ပက်ထရိုနယ်လာ ဝယီးယတ်(Petronella Wyatt])တို့ ချစ်ဇာတ်လမ်းများရှိခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ဝင်နှစ်ကြိမ်ဖျက်ချသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျွန်ဆင်သည် ထိုပြောဆိုမှုများကို အခြေမြစ်မရှိဟု ပြောကြားခဲ့၏။ စွပ်စွဲမှုများကို သက်သေပြပြီးနောက် မိုက်ကယ် ဟိုးဝက်(Howard)က ပါတီ၏ အတိုက်အခံအစိုးရအဖွဲ့နောက်ယောင်ခံ အနုပညာယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး(shadow arts minister) နှင့် ပါတီဒုခေါင်းဆောင်နေရာမှ ထွက်ရန်ပြောသည်။ ဂျွန်ဆင်မှ ငြင်းဆိုသဖြင့် ရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုအပုတ်ဇာတ်လမ်းကို သရော်သောအားဖြင့် ဖေဖေ ဘယ်သူလဲ(Who's the Daddy?)ဆိုသောပြဇာတ်တစ်ခုတွင် ဇာတ်ရုံလောကဝေဖန်ရေးသမားနှစ်ဦးက အစ်(စ်)လင်တန်ရှိ ကင်းဟတ်ဇာတ်ရုံတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတိုက်အခံဝန်ကြီးအနေဖြင့် ဂျွန်ဆင်တက္ကသိုလ်များသို့သွားရောက်( ဤပုံတွင် နော်တင်ဟမ်တက္ကသိုလ်) 2006)
၂၀၀၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ဟန်လေမဲဆန္ဒနယ်အတွက် ထပ်မံအရွေးခံရ၍ လေဘာပါတီနိုင်ကာ ဟိုးဝပ် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်ဆောင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်သည်။ [[ဒေးဗစ် ကင်မရွန်|ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း]ကိုဆက်ခံသူ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထောက်ခံခဲ့သည်။ ကင်မရွန်း အရွေးခံပြီးနောက် ဂျွန်ဆင်အား ကျောင်းသား/သူများအကြား ၎င်း၏ ရေပန်းစားမှုကို အသိမှတ်ပြုရင်း အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတိုက်အခံဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ​၂၀၀၆ ဧပြီ၌ the News of the Worldသတင်းစာက ဂျွန်ဆင်သည် သတင်းထောက်Anna Fazackerleyနှင့်လည်း ဇာတ်လမ်းများရှိသည်ဟု စွပ်စွဲရာ နှစ်ဦးစလုံးမှာ မှတ်ချက်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့၏။ များမကြာမီ Fazackerleyကိုစတင် အလုပ်ခန့်ထားခိုင်းစေခဲ့၏။ ၂၀၀၆ စက်တင်ဘာတွင် ၎င်းသည် ပါပူဝါနယူးဂီနီရှိ ကွန်ဆာဗေးတစ်ခေါင်းဆောင်ခဏခဏပြောင်းသည်ကို ဇာတ်တူသားစားသုံးခြင်း(cannibalism)ဟု နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုသဖြင့် ထိုသံရုံးက ကန့်ကွက်ခဲ့၏။ ၂၀၀၅၌ The Spectator ၏အမှုဆောင်ချုပ်အသစ် အန်ဒရူးနေးလ်က သူ့အားအယ်ဒီတာရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန် ရွေးချယ်ခြင်း: ၂၀၀၇–၂၀၀၈[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၇ မတ်လတွင် လာမည့် ၂၀၀၈မြို့တော်ဝန် ရွေးကောက်ပွဲ၌ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အဆိုပြုသည်။  ကွန်ဆာဗေးတစ်အများစုမှာ နစ်ဘိုးလ်စ်(Nick Boles)ကိုသာ အလေးပေး၍ ဂျွန်ဆင်ကို လေးနက်မထားခဲ့ပေ။ ဘိုးလ်စ်နှုတ်ထွက်ပြီး ဂျွန်ဆင်မှာ ကင်မရွန်း၏ ထောက်ခံမှုရရ ဇူလိုင်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
အကယ်၍ မြို့တော်ဝန်အဖြစ်အရွေးခံရပါက ဂျွန်ဆင်သည် မြို့၏တွဲဆက်ဘတ်စ်ကားများနေရာ၌ New Routemasterဖြင့်အစားထိုးပေးမည်ဟု ကတိပေး။
မြို့တော်ဝန်ဖြစ်မြောက်ရေးလှုံ့ဆော်ရာတွင် ဘတ်စ်ကားအသစ်များအစားထိုးခြင်း၊ ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား လုံခြုံမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူငယ်များရာဇဝတ်ပြစ်မှုလျော့ကျစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ကိုအာရုံထားအလေးစိုက်ခဲ့၏။ ပြင်းထန်၍နာတာရှည် ရောဂါနာကျင်မှုများကိုသက်သာစေရန် ဆေးခြောက်(ကျန်းမာရေးအတွက်) သုံးစွဲခြင်းဥပဒေကို ပို၍အဆင်ပြေစေရန် မဲဆွယ်လှုံဆော်မှုပြုရာတွင်ထောက်ခံပြောဆိုသည်။  မဲပေးသူများအကြားပြောကြသည်မှာ " တို့တော့ ဘောရစ်ကိုပဲ မဲပေးမယ်ကွာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကရယ်ရတယ်" ဆိုသော တူညီသည့်သဘောထားကို ပြိုင်ဘက်များက ညည်းညူမှုများနှင့်အတူ ဂျွန်ဆင်၏ မဲဆွယ်လှုံ့ဆော်မှုသည် ၎င်း၏မူဝါဒကိုမထောက်ခံသူများအကြား၌ပင် သူ၏ကျော်ကြားမှုကိုတိုးပွားစေခဲ့၏။
ထိုစဉ်က လက်ရှိမြို့တော်ဝန် (လေဘာပါတီ) Ken Livingstoneကမူ ဂျွန်ဆင်ကို အလေးအနက်ထားပြီး သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဂျွန်ဆင်ဟာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသူဖြစ်သည်ဟု ရည်ညွှန်းဖူးသည်။  စုစုပေါင်းအနေဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ဘောရစ်က ၅၃% ၊ Livingstoneက ၄၇%ရရှိ၍ အနိုင်ရသည်။ဟန်လေနယ် အမတ်ဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ 
မြို့တော်ဝန် ပထမသက်တမ်းနှင့် အထွေထွေ : ၂၀၀၈–၂၀၁၂[ပြင်ဆင်ရန်]
လန်ဒန်မြို့တော်ခန်းမ မြို့တော်ဝန်ရုံးသို့ဝင်လာသောအခါ ပထမဆုံးတရားဝင်ပါဝင်ရသည်မှာ ထွာဖာလ်ဂါရင်ပြင်(Trafalgar Square) ၌ ဆစ်ခ်ဘာသာရေးပွဲ ဝိသာခီပွဲ(Vaisakhi)ကျင်းပမှုပင်ဖြစ်သည်။ Tim Parkerကို ဒုမြို့တော်ဝင်ခန့်သော်လည်း ရုံးတွင်းပြဿနာတစ်ချို့ကြောင့် ပြန်လည်ဖြုတ်ခဲ့သည်။
လန်ဒန်မြို့တော်ခန်းမ၌ မြို့တော်ဝန်အဖြစ်အရွေးခံရသောအခါ မိန့်ခွန်းပြောနေပုံ
ဂျွန်ဆင်နှင့်မြိုပြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ New Routemasterဘတ်စ်ကားများအားမတ်ဆက်ခြင်း။
ယခင်က Livingstone တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ထားသော မြို့တော်ဝန် နှင့်ပတ်သက်သော အဓိကအပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ယခင်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အကောင်ထည်ဖော်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်ပြောင်းပစ်သည်။  လန်ဒန်မြို့ လူကျပ်သောနေရာသို့ မော်တော်ယာဉ်များမောင်းလျှင် အခွန်ကောက်ခံမှုနယ်မြေ အနောက်ဘက်သို့တိုးချဲ့မည့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းသည်။ လေးဘီးစလုံးရုံး၍မောင်းသောကားများ (four-wheel-drive vehicles)အပေါ် အထက်ပါအခွန်တိုးကောက်မည်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့၏။ Livingstoneစီစဉ်ထားသော ၂၀၁၂-နွေရာသီ အိုလံပစ်အတွက်လုပ်ငန်းများ၊ မီးရထားဖြတ်လမ်းလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် နာမည်ကောင်းယူသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်။ ယခင်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဆိုပြုထားသော ပြည်သူ့စက်ဘီးငှားရန်းခြင်းစီစဉ်မှုကို မိတ်ဆက်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့၏။ ဘောရစ်စက်ဘီးများဟု လူသိများခဲ့လေသည်။ မြို့ရွေးကောက်ပွဲကတိအတိုင်း မြို့လည်ခေါင် ဘတ်စ်ကားများကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ကာ သိမ်းစ်မြစ်ကို ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်မည့် ကောင်းကင်ကြိုးနှင့်မောင်းနှင်မည့် အမ်းမရိတ်လေကြောင်းကတည်ဆောက်သော ကေဘယ်လ်ကားလုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကို အကောင်ထည်ဖော်၏။
စတန်ဒါ သို့ ဘောရစ်စက်ဘီးများ ကို အကောင်ထည်ဖော်ခြင်း
၎င်း၏ ပထမဆုံးမူဝါဒမှာ ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးနေရာများတွင် အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းကို တားမြစ်သည်။ လန်ဒန် မီးရထားဝန်ဆောင်မှု၌ ကြိုက်သလောက်သွားကျသလောက်ပေး Oyster cardစနစ်ကို ချဲ့ထွင်ရန်ကြေညာသည်။ ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ၌ လန်ဒန်ပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၅တွင် မြေအောက်ရထား လက်မှတ်ရုံများပိတ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဂျွန်ဆင်၏ စည်ပင်အဖွဲ့မှာ ပေါင် သန်း(၁၀၀)ချေးငွေရယူခဲ့ရပြီး ပို့ဆောင်ရေးအဖိုးခမှာ ၅၀%မြင့်တက်သွား၏။ ပတမသက်တမ်းအတွင်း တစ်ချို့ကိစ္စများကို လက်ဝဲယိမ်းသည့် အနေထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသည်များလည်းရှိခဲ့ရာ ဥပမာ။ ။ လန်ဒန်တွင် အနည်းဆုံးလုပ်ခကိစ္စရပ်၊ တရားမဝင် နိုင်ငံကူးပြောင်းသူများကို ထောက်ခံခဲ့ရလေသည်။ အခြားနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လူသိထင်ရှား မှတ်ချက်ပြုလေ့မရှိသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သွေဖည်ကာ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘားရက် အိုဘားမားအနိုင်ရခဲ့သည်ကို ထောက်ခံခဲ့၏။
ပြန်လည်အရွေးခံယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် ဒုတိယသက်တမ်း : ၂၀၁၂-၂၀၁၆[ပြင်ဆင်ရန်]
တစ်ဖက်တွင် Livingstone၏ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအပေါ် လူကြိုက်များသော်လည်း ဂျွန်ဆင်၏ ရာဇဝတ်မှုနှင့် စီပွားရေးမူများကို ပို၍ယုံကြည်လာခဲ့သာ်ဟု မဲများကညွှန်းဆိုနေသည်။  ဤတစ်ကြိမ်တွင်လည်း လေဘာပါတီဘက်မှ ပြိုင်ဘက်မှာ Livingstoneပင်ဖြစ်ရာ ၎င်းမဲဆွယ်ပွဲ၌ Livingstoneသည် အခွန်ရှောင်သည်ဟု စွပ်စွဲသဖြင့် Livingstoneကလည်း ၎င်းကို မျက်နှာပြောင်လူလိမ်ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့၏။ ၂၀၁၂ တွင် ဂျွန်ဆင်သည် လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ပြန်လည်တင်မြောက်ခြင်းခံရသည်။
၂၀၁၂ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပွဲရှိ ဂျွန်ဆင်
၂၀၁၂ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပွဲအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုမှာ လန်ဒန်တွင်ပို့ဆောင်ရေးများကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပွဲတော်အတွင်းလာရောက်သူများရှိနေစဉ်ဘတ်စ်ကားများ ပိုမိုရနိုင်စေရန်တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄တွင် ဝင်စတန်ချာချီနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အထုပ္ပတ္တိ "ချာချီ၏ ဆခွဲကိန်း" (The Churchill Factor)စာအုပ်ကို ဂျွန်ဆင်သည်မည်သို့မည်ပုံ မိမိကိုယ်တိုင် ချာချီနှင့်ထပ်တလဲလဲနှိုင်းယှဉ်မှုများကိုအလေးပေးခဲ့သော မီဒီယာများနှင့်အတူရောင်းအားမြှင့်ခဲ့သည်။  တတိယသက်တမ်းအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ ၂၀၁၆ မေ ၅ရက်တွင် ရာထူးမှထွက်ခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန်ဖြစ်စဉ် အောက်လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်မဝင်ရောက်ဟု ပြောဆိုမှုရှိခဲ့၏။ များစွာသော သတင်းမီဒီယာများ၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအပြီး ၂၀၁၅ ယူကေအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ Uxbridge and South Ruislipမဲဆန္ဒနယ် (ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကို ထောက်ခံသောနယ်) အတွက် လွှတ်တော်အမတ်ပြန်လည်လုပ်ရန် ၂၀၁၄ ဩဂုတ်တွင် ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ စက်တင်ဘာတွင် အမတ်ဖြစ်၏။ ၂၀၁၅ မေလ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်အမတ်ဖြစ်လာကာ ပါတီခေါင်းဆောင်၊ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေသော ကင်မရွန်းကို အစားထိုးဖယ်ရှားချင်သောကြောင့်ဟု တွက်ချက်မှုများလည်းရှိခဲ့၏။
ဘရက်ဇစ် လှုပ်ရှားမှု : ၂၀၁၅-၂၀၁၆[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘရက်ဇစ် Brexit သို့ Brixit (IPA /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) အရှည်စကားလုံး - BRITISH Exit ( the withdrawal of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU)) ဟု Bri နှင့် Exit အသံကို ရောနှောခေါ်ဆိုသော ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒန်းနိုင်ငံဥရောပ သမဂ္ဂမှ ထွက်ခွာခြင်း။Brexit
ဂျွန်ဆင်သည် ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၌ ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်မှ ယူကေထွက်ခွာခြင်းအရေးနှင့် ပတ်သက်သော "ထွက်" လှုံ့ဆော်စည်းရုံးရေးတွင် ထွက်ခွာမည့် ဘက်က လှုပ်ရှားထောက်ခံသည်။ ကင်မရွန်း၏ ထွက်ခွာခြင်းအပေါ် သတိပေးချက်များကို ပုံကြီးချဲ့လွန်းသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ စီးပွားရေးဈေးကွက်များ၏ ထုတ်ဖော်ဘာသာပြန်ချက်များအပြီးတွင် ပေါင်စတာလင် ငွေကြေးမှာ ၂၀၀၉ မတ်လမှစ၍ ယူအက်စ် ဒေါ်လာနှင့်ယှဉ်လျှင် ၂%ခန့် အတော်ကြီးကျဆင်းသွားရာ အနိမ့်ဆုံးအနေထားသို့ရောက်သွားသည်။ 
မန်ချက်စတာမြို့ ဘရက်ဇစ်ဆန့်ကျင်ရေး၌ သုံးထားသော တိုရီပါတီ အဖွဲ့ဝင်လေးဦး၏ပုံ လေထိုးရုပ်။ ထိုလေးဦးမှာ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်၊ဒေးဗစ်(စ်) ဒေးဗစ်(ဒ်)၊မိုက်ကယ် ဂို့ဗ်၊ထရီဇာ မေ တို့ဖြစ်ကြ၏။
၂၀၀၆ ဧပြီ ယူကေမှ " The Sun"သတင်းစာဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် အိုဘားမား၏ ပြောဆိုမှုဖြစ်သော ယူကေသည် ဥရောပ သမဂ္ဂ၌သာဆက်နေသင့်သည်ဆိုခြင်းကို ဂျွန်ဆင်က အိုဘားမား၏အမြင်များမှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်ကင်ညာနှင့်နောက်ခံပတ်သတ်မှုရှိသောကြောင့် ၎င်းရှေးဘိုးဘွားတို့၏ ဗြိတိသျှအပေါ်မကျေချမ်းခြင်းများနှင့် ရုပ်လုံးဖော်ထားသည်ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ဇွန် ၂၂ ဝင်ဘာလေအားကစားရုံကြီး၌ ပရိသတ် ၆၀၀၀ရှေ့ ရုပ်မြင်သံကြားမှလွှင့်သော အခြေတင်စကားရည်လုပွဲဝယ် ၂၃ ဇွန်သည် ဗြိတိန်၏ လွတ်မြောက်ရေးနေ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဂျွန်ဆင်ကပြောဆိုခဲ့၏။ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် မလွတ်လပ်ဘူးဟူသော စိတ်ကူးဆိုတာကတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိလှပါဘူးဟု ဂျွန်ဆင်၏ ပြောဆိုခြင်းကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ဒီစကားရည်လုပွဲတစ်ခုလုံးက ဒီနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်ခြာအာဏာကို သရုပ်ဖော်ပါတယ်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ထွက်ခွာရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများအောင်မြင်လာခဲ့အပြီးနောက် ကင်မရွန်းနှုတ်ထွက်သည်။ ဂျွန်ဆင်ကို ၎င်း၏နေရာ၌ ဆက်ခံရန် ဦးဆောင်သူဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ၌ ပါဝင်မည်မဟုတ်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ များမကြာမီ ထိုစဉ်က ဂျွန်ဆင်၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သော မိုက်ကယ်ဂို့ဗ်က ဂျွန်ဆင်သည် ခေါင်းဆောင်မှုကို မထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း၊ ရှေ့လာမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက် အဖွဲ့ကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့၏။ ဂျွန်ဆင်က ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ် Andrea Leadso၏ အရွေးခံခြင်းကို ထောက်ခံသော်လည်း သူမမှာ တစ်ပတ်အကြာ၌ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ပြိုင်စရာမလိုပဲ ထရီဇာ မေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ၏။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး : ၂၀၁၆–၂၀၁၈[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၇ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွင် သမ္မတ ထရမ့်နှင့်အတူ
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ၌ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ မိုဟာမက် ဂျားဗတ် ဇာရစ်ဖ်နှင့် တွေ့ဆုံပုံ
အီယာမာဟာရီကိန်း တိုက်ခတ်အပြီး ဗြိတိသျှအပျိုစင်ကျွန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း
ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင် နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ထရီဇာ မေဖြစ်လာသောအခါ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်၌ ဂျွန်ဆင်ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခန့်သည်။ စစ်တမ်းများအရ ၎င်းကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခန့်အပ်ခြင်းသည် ဗျူဟာအရ ၎င်းကိုနိုင်ငံရေးအရ အားပျော့သွားစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘရက်ဇစ်ရေးရာဝန်ကြီး(Brexit Secretary) နှင့် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး(International Trade Secretary)ဟူသော ရာထူးအသစ်နှစ်ခုကို တီထွင်လိုက်ခြင်းသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို(Foreign Secretary ) အာဏာပါဝါသိပ်မရှိလှသော ပြယုတ်သာသာဖြစ်သွားစေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ပခဏခဏဆိုသလိုထွက်ခွာသွားလာရသည့်အတွက် ထရီဇာ မေက သူမကို ဆန့်ကျင်နိုင်သော ပါလီမန် နောက်တန်းထိုင်ခုံကသူများ(Backbenckers)ကို စုစည်းပြီး မဆွယ်နိုင်တော့ပေ။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အီးယူမှထွက်ခွာခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော တာဝန်များကိုင်တွယ်စေရန် ခိုင်းစေသည်။ ဂျွန်ဆင်အား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်သောကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ယူကေ-ယူအက်စ် ဆက်ဆံရေးအက်ကွဲနိုင်ပြီး ဂျာမနီနှင့်ဆက်ဆံရေးတိုးဖွယ်ရာရှိသည်ဟု အိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့က ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။ တူရကီ ဥရောပ သမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးကို ကူညီပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပြီး တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန်အစိုးရအဖွဲ့ကို ထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြသွားခဲ့၏။ ယီမင်ပြဿနာကို ဆော်ဒီဦးဆောင်၍ လှုပ်ရှားသည်ကို ထောက်ခံကာ ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ ယူကေလက်နက်များ ပိတ်ပင်တားဆီးမည်ကို ငြင်းဆိုခဲ့လေသည်။ 
ယူအက်စ်၊ယူကေ၊ဆော်ဒီ၊ ယူအေအီးမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ယီမင်အရေးဆွေးနွေးခြင်း အလုပ်သဘောညစာစားပွဲမတိုင်ခင်၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၆
​အီးယူမှ ထွက်ခွာပြီးလျှင်လည်း ဗြိတိသျှပိုင်နက်ဂျီဘရော့တာအချုပ်ခြာမှာ လုံးဝပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ကောင်း ဧပြီ ၂၀၁၇ တွင်ဂျွန်ဆင်ကပြောဆိုခဲ့ကာ နောက်ထပ်ကတိပေးခဲ့သည်မှာ အိုင်ယာလန်နယ်စပ်သည်လည်း လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိ နဂိုအတိုင်းပဲ ကျန်ရစ်မည်ဟု မြောက်အိုင်ယာလန်တွင် ရောက်စဉ်ပြောကြားသွားသည်။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ပြီး ဂျိုးဇက် ရပ်ယ(ဒ်) ကစ်ပလင်း(Joseph Rudyard Kipling)၏ ကဗျာဖြစ်သော မန္တလေးကဗျာမှ စာသားများကို ရွှေတိဂုံဘုရားတွင်ရွတ်ဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ် အတူရှိနေသော ဗြိတိသျှသံအမတ်ကြီးက မသင့်လျှော်ဟုအကြံပြုသော်လည်း ရွတ်ဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ကဗျာရွတ်သည့်အတွက် ၎င်းကို ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် မြန်မာနိုင်ငံ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံစဉ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆
ရုရှားအပေါ် ပိုမိုပြင်းထန်သော မူဝါဒကို ထောက်ပံ့အားပေးသည်။ ဗလာဒီမာပူတင်၏ ၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းကို အဒေါ့ဖ် ဟသ်တလာ၏ ၁၉၃၆ နွေရာသီ အိုလံပစ်လက်ခံကျင်းပခြင်းနှင့်ခိုင်းနှိုင်းခဲ့၏။ နာဇီကိုတိုက်ခဲ့ရာ၌ လူသန်းပေါင်းများစွာ စတေးခဲ့ရသော ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် ယခုလို လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိ တန်ဖိုးမရှိသော နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဂျွန်ဆင်အားပြန်လည်ရှုံချခဲ့၏။
ရုရှားမှ ဂျာမနီသို့ဆက်သွယ်သော Nord Stream2ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသည် ဥရောပက ဆိုးဝါးသောရုရှားအပေါ်မီခိုရသည့် ခြိမ်းချောက်မှု ကွဲထွက်စေမှုဟုဖော်ပြခဲ့၏။ မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာတွင် ဘရက်ဇစ်ပြီးဆီးပါက တစ်ပတ်တွင် အီးယူသို့ပေးရသော ပေါင် ၃၅၀ သန်းကို ယူကေက ပြန်လည်ရယူ၍ နိုင်ငံ့ကျန်းမာစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း (National Health Service - NHS)သို့ ထည့်ဝင်စေမည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သေးသည်။ ၂၀၁၇ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ဝန်ကြီးချုပ်မေ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို စိန်ခေါ်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ငြင်းဆိုခဲ့၏။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် ဘန်ဂျမင် နေတန်ယာဟုနှင့်အတူ၊ ၂၀၁၈ ဇွန်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဂျေရုစလင်အား အစ္စရေးနိုင်ငံမြို့တော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းကာလတစ်ခုပါဟုလည်းပြောဆိုသွားခဲ့သေးသည်။ ဝန်ကြီူချုပ်၏ ဥရောပ သမဂ္ဂမှ ယူကေထွက်ရှိရေးကို ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်မှု သဘောမကျသဖြင့် ဝန်ကြီးရာထူးစွန့်၍ အောက်လွှတ်တော် နောက်တန်းထိုင်ခုံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့လေသည်။
ဂျွန်ဆင်ကို ဝန်းရံပါဟူသော ၎င်း၏စည်းရုံးရေးအမှတ်တံဆိပ်
ထရီဇာ မေနှုတ်ထွက်အပြီး ၂၀၁၉ မေ ၁၆ ၌ လာမည့်ကွန်ဆာဗေးတစ်ခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ပွဲ၌ ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့၏။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ယူကေသို့မသွားရောက်ခင် ဂျွန်ဆင်ကို ထိုရွေးချယ်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်၍ အင်တာဗျူးတစ်ခု၌ " ဘောရစ်က ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ တကယ်သင့်လျော်တဲ့ ပါတယ်" ဟု ပြောကြားချီးမွန်းခဲ့လေသည်။  ဇွန် ၇ တွင် မေ နှုတ်ထွက်အပြီး ၎င်းစည်းရုံးရေးကို စတင်သည်။ "သုံးနှစ်ကြာပြီ၊ နှုတ်ထွက်ရမဲ့ နေ့ရက်နှစ်ခုလဲ လွဲခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အောက်တိုဘာ ၃၁ မှာ အီးယူမှ ထွက်ကိုထွက်ရမယ်။ ပါလီမန်က သုံးခေါက် ပယ်ချထားသော လက်ရှိစေ့စပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ထက် တို့တွေပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် အလွတ်ထွက်တဲ့ရလဒ်ကို (no-deal outcome - အပေးအယူမရှိဘဲအီးယူမှ ထွက်ခြင်း)မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ထွက်ရှိတဲ့အခါ အဲဒီ ပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်မယ်လို့လည်း မယူဆပါဘူး။ အပေးအယူမရှိဘဲ ထွက်ရရင်လည်း ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ အဲဒီ စွယ်စုံသုံးလို့ရတဲ့ စေ့စပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ကရိယာကို ဘေးထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ တစ်ဦးဦးက အကြံပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အတော့်ကိုပဲ အံဩစရာဖြစ်မှာပါ။" - ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်  ပါလီမန်အမတ်များ နောက်ဆုံးအကြိမ်မဲစာရင်းအရ ဂျွန်ဆင်သည်မဲအရေအတွက် (၁၆၀)ရပြီး ဂျရမီး ဟန့်နှင့်အတူ ဆန်ကာတင်နှစ်ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြ၏။ အမတ်များ၏ မဲပေးရွေးချယ်မှုကို ဇူလိုင် ၂၂ တွင်ပိတ်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၂၃ တွင် ကြေညာသော ရလဒ်အရ ဂျွန်ဆင် ၉၂,၁၅၃ မဲ (၆၆%) နှင့် ဟန့် ၄၆,၆၅၆ မဲ (၃၄%) အသီးသီးရှိ၍ ဂျွန်ဆင်ကို ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ကြသည်။
၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၂၄တွင် ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘတ်သည် ထရီဇာ မေ၏ နှုတ်ထွက်ခြင်းကို လက်ခံ၍ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ဂျွန်ဆင်ကို ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ခဲ့လေသည်။ ထိုပါတီ၏ ဝန်ကြီးချုပ် ဘိုနာလော(Bonar Law : ၁၉၂၂-၂၃)ပြီးလျှင် ဗြိတိသျှကျွန်းစု ပြင်ပ၌မွေးဖွားသော ဒုတိယမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဗြိတိသျှပိုင်နက်နယ်မြေများအပြင်ဘက်တွင် မွေးဖွားသော ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်၏။ ၎င်းနှင့်အတူ ထွက်ခွာရန်လှုံဆော်ရေး၌ အတူတွဲလုပ်ခဲ့သော ဒေါမစ်နစ် ကမ်းမင်းစ် ကို ၎င်း၏အကြီးတန်းအကြံပေးအရာရှိ အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ် သမ္မတ အစ်မန်နျူယယ် မက်(ခ်)ရွန်နှင့် အတူ ဘရက်ဇစ်ကိစ္စဆွေးနွေး၊ ပါရီမြို့
၎င်း၏ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မိန့်ခွန်းတွင် ယူကေသည် အီးယူမှ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၃၁ ၌ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအချက်လက်များဖြင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် စေ့စပ်မှုမရှိသည့် အနေထားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ထွက်ပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့၏။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ် ၂၈တွင် ဂျွန်ဆင်သည် စေ့စပ်မှုမရှိသည့် အနေထားဖြင့်ထွက်ခြင်းကို တားဆီးမည်ဘောင် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ခြင်းအနေဖြင့် ဘုရင်မကြီးအား ပါလီမန်ကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှစ၍ ရွေ့ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းကို (စက်တင်ဘာ ၁၀ မှ အောက်တိုဘာ ၁၄ထိ) ပရစ်ဗီကောင်စီ၌ ဘုရင်မကြီးကအတည်ပြုပြီးသည်။ တချို့က ဤသို့ညွှန်းဆိုကြသည်။ ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းသည် အာဏာသိမ်းသည့်သဘောမျိုးနှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူနေပြီး ယူကေအနှံ မြို့များတွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြ၏။ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်စွဲအရ ဂျွန်ဆင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သီးခြားရုံးတော် သုံးခုမှ စတင်စစ်ဆေးသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ တွင် စကော့တလန် တရားသူကြီးများက ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းသည် တရားဥပဒေနှင့် မညီဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ဘဲလ်ဖက်စ်ရုံးတော်မှ ၎င်း၏ ဘရက်ဇစ်အစီအစဉ်များသည် မြောက်အိုင်ယာလန်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမူများကို မကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဆိုသော ပြောဆိုမှုများကို ငြင်းဆန်နေစဉ် ဂျွန်ဆင်မှာလည်း ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းအပေါ် ဘုရင်မအား လိမ်ညာသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုခဲ့၏။  ၂၄ စက်တင်ဘာ၌ နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ခုံရုံးတော်မှ ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းသည် တရားဥပဒေနှင့်မညီဟု တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်၍ ပါလီမန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်းမှာ ပျက်ပျယ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့ပေ။
အတိုက်အခံအမတ်များ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီမှ ပုန်ကန်သူများ(၎င်းကိုမထောက်ခံသူများ)က အလွတ်သဘောအီးယူမှထွက်ရှိခြင်း(No Deal Exit)ကို တားဆီးရန် အစိုးရအဖွဲ့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစနစ်အားထိန်းချုပ်စီမံမှုကိုဆန့်ကျင်၍ အောင်အောင်မြင်မြင် မဲပေးလိုက်သဖြင့် စက်တင်ဘာ ၃ ၌ ရွေးကောက်ပွဲသက်တမ်းဆိုင်ရာပါလီမန်အက်ဥပဒေဖြစ်သော Fixed-term Parliaments Act အရ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲခေါ်ဆိုမည်ဟု ဂျွန်ဆင်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ဆန့်ကျင်မှုများရှိလင့်ကစား ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၄တွင် အီးယူမှအလွတ်မထွက်ရဥပဒေတစ်ရပ်ကို အောက်လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုပြထမ်းမှုများက ဂျွန်ဆင်ကို အောက်တိုဘာ ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲခေါ်ဆိုစေခြင်းဖြစ်စေခဲ့လေသည်။ ၎င်း၏အရွေ့မှာ လွှတ်တော်သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ထောင်ခံမှုမရခဲ့၍ မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် အထွေထွေ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပထမဆုံးအကြိမ် အစိုးရအစည်းဝေးပွဲ၊ အမှတ်(၁၀)၊ ဒေါင်းနင်းလမ်း 25 July 2019
၎င်း၏ပထမဆုံးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဗြိတိန်၏ ခေတ်သစ်အစိုးရအဖွဲ့ဟု ခေါ်ဝေါ်ရင်း ဇူလိုင် ၂၄ ၌ဖွဲ့စည်းသည်။
အခြားသောခန့်အပ်မှုများတွင်ဂျွန်ဆင်သည် ဒေါမစ်နစ် ရာ့ဘ် (Dominic Raab)အား ပထမအတွင်းဝန်ရာထူး နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(First Secretary of State and Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs)အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး စဂျစ် ဂျားဗစ် (Sajid Javid) နှင့် ပရစ်တီ ပဲတယ်လ် (Priti Patel) တို့ကို ဘဏ္ဍာရေးရာအဓိပတိ (Chancellor of the Exchequer) နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး(Home Secretary)အဖြစ်အသီးသီးခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆင်က အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်မေ လက်ထက်က အရေအတွက်ထက် ၄ဦးပိုမိုခန့်အပ်သဖြင့် ဝန်ကြီး ၃၃အထိရှိလာခဲ့သည်။ ခန့်အပ်ခံရသူများထဲမှလေးပုံတစ်ပုံမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင် (၄) ဦး နှင့်နောက်ထပ်ဝန်ကြီးနှစ်ဦး သည်လူနည်းစုနောက်ခံမှဖြစ်ကြပြီး၊ လူနည်းစုလူမျိုးများကိုယ်စားပြုမှုအတွက် အစိုးရအဖွဲ့သည်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်။ ခန့်အပ်ခံများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးသည်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသောကျောင်းများသို့သွားခဲ့ပြီးထက်ဝက်နီးပါးသည်အောက်စ်ဘရစ်တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဂျွန်ဆင်သည် ပါတီခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကတိကဝတ်ကိုဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမည့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံရေးရာဝန်ကြီး(Minister for the Union)ဆိုသော ရာထူးအသစ်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။
ပြင်သစ်အနောက်တောင်ပိုင်း ဘီယာရစ်မြို့(ပြင်သစ်အသံ-ဗြာရစ်မြို့)၌ ၄၅ကြိမ်မြောက် G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် နှင့်အတူ၊ ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၉။
ဟောင်ကောင်၏ ဖီးနစ်တီဗီအင်တာဗျူးတစ်ခု၌ ၎င်းအစိုးရသည် တရုတ်ပြည်ကြီးနှင့် သမ္မတရှီကျင်းပင်၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သော ပိုးလမ်းမပတ်လမ်းအစီအစဉ်ကို ထောက်ခံ၍ ယူကေသည် တရုတ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွင် ဥရောပ၌အပွင့်လင်းဆုံးစီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်စေရမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။အီးယူ၏ မာကိုစာလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုကိုလည်း ထောက်ခံသည်။ ထိုသဘောတူညီချက်မှာ ကမ္ဘာ၏အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးနယ်မြေဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။  စက်တင်ဘာ ၃ တွင် ဖီးလစ်လီသည် ၎င်း၏ ဘရက်ဇစ်မူများကို သဘောမကျ၍ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်ပါတီသို့ ကူးပြောင်းသဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အား အောက်လွှတ်တော်တွင် အများစုအရေအတွက်(working majority) ဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်။ ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ပင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပုန်ကန်သူများ ယခင်ပါတီ၏ အဓိပတိများဖြစ်သောKenneth Clarke၊ Philip Hammond၊ Nicholas Soames(ဝင်စတန် ချာချီ၏ မြေး)အပါအဝင် ၂၁ ဦးသောအမတ်များကို ပါတီ၏အမိန့်နှင့် ဆန့်ကျင်မှုရှိသဖြင့် ပါတီမှ ထုတ်နှုတ်ဖယ်ရှားခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၂၉ အောက်တိုဘာ၌ ထိုထုတ်ပစ်ခဲ့သော ယခင်ပါတီဝင် ၁၀ ဦးကိုပြန်လည်လက်ခံခဲ့၏။အထက်ပါ ထုတ်နှုတ်ရှင်းသည်ကို သဘောမကျသောအားဖြင့် တစ်ခြားသောနှုတ်ထွက်မှုများလည်းရှိခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၉ အောက်တိုဘာတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ တွင် ရွေးကောက်ပွဲခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲကြီးကား ၁၉၈၇အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကတည်းက ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကို အကြီးအကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။
နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်အနေဖြင့် ၎င်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံးတိုရီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသူဟု ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသည်။ ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာ(The Guardian)က ဂျွန်ဆင်သည် မြို့တော်ဝန်ဖြစ်စဉ် စီးပွားရေးနှင့် လုမှုရေးလစ်ဘရယ်ဝါဒကို ရောနှောအသုံးချခဲ့သည်ဟုဆိုကာ စီးပွားရေးသတင်းစာက (The Economist) ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ၎င်း၏တိုရီပြတင်းဘောင်ထက် ပိုမိုသာလွန်ခဲ့ပြီး ပို၍လွတ်လပ်သောရှုထောင့်အမြင်ကို ရွေးချယ်အသုံးချသည် ဟုရေးသားခဲ့လေသည်။ ၎င်းသူငယ်ချင်းနှင့် အထုပ္ပတ္တိ ရေးသားသူ အန်ဒရူးဂင်ဆန်က ဤသို့ဆိုခဲ့၏။ စီးပွားရေး၊လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် လစ်ဘရယ်တစ်ယောက် စစ်စစ်ဖြစ်ကာ ကြီးငယ်စဉ်ဆက်စီစဉ်မှုစနစ်၏ မုချဧကန်အမှန်သဘောတရားကို သိမြင်နားလည်မှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို ချစ်မြတ်နိုးမှုမှတဆင့် ၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအရည်အသွေးများအား တိုရီဝါဒဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားလေသည်။ လူမှုရေးရာ၊ နိုင်ငံကူးပြောင်းမှု၊လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် လစ်ဘရယ်ဆန်သော ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်များကို ၂၀၁၉တွင် ထင်းထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်သည်။ ၂၀၁၉ တွင် ယခင်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဒုတိယခေါင်းဆောင်Michael Heseltine ကဂျွန်ဆင်သည် သူ့ကိုယ်သူ တစ်နိုင်ငံလုံးကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒသမားဟု သုံးနှုန်းရန် သူ့မှာအခွင့်အာဏာမရှိပါဟုပြောဆိုကာ "၎င်းရဲ့မိတ်ဆွေ ဘရက်ဇစ်ခွဲထွက်ရေးသမားများ၏ဝိသေသ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်သာကြည့်သည့်အမြင်ရှိသော၊ နိုင်ငံခြားသားဆိုလျှင် ဝေဖန်၍အမြင်မကြည်သော လက်ယာသမားများက ဝန်ကြီးချုပ်ထံတွင် လစ်ဘရယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒအရိပ်အယောင်များရှိသည်ကို မိသွားခဲ့ပြီးကတည်းက အခုထိလည်း ထိုဝါဒများရှိနေသလားဆိုသည်ကိုတော့ စိုးရွံ့မိပါတယ်"ဟု ရေးသားခဲ့ပေသည်။
အီးယူကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဂျီးန်ကလော့ဂျန်ကာ(Jean-Claude Juncker)နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်၊ 16 September 2019။
ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီကို နှစ်သက်ချီးမွမ်းသည်။ "ချာချီက အရိုင်းဖက်ဆစ်တွေ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ အာဏာရှင်တွေဆီကနေ ဒီတိုင်းပြည်ရယ် ဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့တာမို့ သူ့ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေတွက်မရနိုင်အောင်အကြွေးတွေတင်နေပါတယ်။"ဟု ပြောဆိုဖူးသည်။ ချာချီသည် အလုပ်သမားလူတန်းစားနှင့် သူတို့၏ဘဝများကို လေးလေးနက်နက်ဂရုစိုက်သော လူမှုပြုပြင်ရေးသမားဟုလည်း ထပ်ပေါင်းဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၃၌ ဂျွန်ဆင်က "ကျွန်တော်ဟာ အီးယူကို လုံးဝကြီးအမြင်မကြည်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အီယူကို နဲနဲတော့ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ပါ။ အီးယူမရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့တွေ အီးယူလိုဟာမျိုးကို တီထွင်ခဲ့ကြမှာပဲ။  မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ယူကေ၏ နိုင်ငံကူးပြောင်းရေးမူကို ထောက်ခံသည်။ ၂၀၁၈ ဘရက်ဇစ်ညှိနှိုင်းမှုအတွင်း ​ဗြိတိန်ကို Single Market (ဥရောပ ဘုံဈေးကွက်) မှထွက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။  ပြီးလျှင် နိုင်ငံကူးပြောင်းခွင့်ကိစ္စကို ဝန်ကြီးချုပ်မေထက်ပို၍ လစ်ဘရယ်ဆန်သော ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ် ၁၉၌ အီးယူသို့ ဝန်ကြီးချုပ်မေ ညှိနှိုင်းခဲ့သော မြောက်အိုင်ယာလန်-အိုင်ယာလန် နယ်စပ်စည်းကို နောက်ခြံတံခါးပေါက်ထားရှိမှု (backstop)ကို ဖယ်ရှားရန် စာရေးသားခဲ့၏။ အီးယူကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Donald Tuskက ထိုအဆိုပြုချက်ကို ပယ်ချခဲ့လေသည်။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ် ၂၆ ၌ အကယ်၍ ဤတိုင်းပြည်သည် အီးယူမှ အလွတ်ထွက်ခွာရပါက ထွက်ခွာရေးညှိနှိုင်းမှုစာချုပ်ပါဖြစ်သော ပေါင်သန်း ၃၉ဘီလီယန်ကို ပေးမည်မဟုတ်ဟု ပြောဆိုရာ အီးယူညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးမှူး Guy Verhofstadtသည် ယူကေက ငွေကြေးအပြည့်မပေးလျှင် နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုရှိလာမည်မဟုတ်ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ 
ယူနီယံဂျက်အလံဖြင့် ဆေးခြယ်ထားသော Aston Martin ကားနှင့်အတူ ဂိုက်ပေးနေပုံ
အများအားဖြင့် ဘောရစ်(စ်) ဟုသိကြသော်လည်း ဘိုဂျို(BoJo)ဆိုသော နာမည်အပြင် တစ်ခြားသောနာမည်ပြောင်များစွာရှိလေသည်။  ၎င်းသည် ဖရိုဖရဲပုံစံလိုလိုအသွင်အပြင်ကို သေချာမွေးယူသည်။ ဥပမာ - လူထုရှေ့ထွက်လျှင် သေချာကို ဆံပင်ကိုဖွထားတတ်သည်။ သူ့ကို Crines က ဂျိုကာဟု သမုတ်သည်ကို ဂျွန်ဆင်က "ဟာသဆိုတာ ဆေးခါးကို ချိုအောင်၊ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို ရှင်းကနဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပဲ"ဟုဆိုခဲ့ဖူးသည်။ 
အင်္ဂလိပ်မိဘများမှ နယူးယောက်မြို့တွင်မွေးဖွားသောကြောင့် ယူကေ-ယူအက်စ် နိုင်ငံသားနှစ်ခုစလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်တွင် အခွန်ပေးချေရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းမှာ အငြင်းပွားမှုရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မတော့ ထိုအခွန်ပေးချေခဲ့လေသည်။ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ တွင် ယူကေကို သစ္စာထားကြောင်းပြသရန် ယူအင်စ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ကာ ၂၀၁၆တွင် စွန့်လွှတ်သည်။ ကက်သလစ်အဖြစ် ရေဖျန်းမင်္ဂလာခံခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အိန်ဂျလိကန်(ခရစ်ယာန်)သာသာနာသို့ပြောင်းလဲသည်။ သို့သော် ၎င်းယုံကြည်မှုများသည် ပေါ်လိုက် ပြောက်လိုက်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုပြန်သည်။ ထပ်မံ၍ သူသည် တကယ့်ကျင့်သုံးသော ခရစ်ယာန်ဝင်မဟုတ်ဟုလည်းဆိုခဲ့သည်။ လောကီလူသားဝါဒ(secular humanism])[မှတ်စု ၃]ကို အကောင်းမြင်၍ ထိုဝါဒသည် ခရစ်ယာန်အတွေးအခေါ်ထက် ရှေးဂရိ၊ရောမတို့ကြောင့် ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုလည်းမြင်သည်။
၁၉၈၇တွင် Allegra Mostyn-Owenနှင့်လက်ထပ်သည်။ ၁၉၉၃တွင် ကွာရှင်း၍ ၁၂ရက်အကြာ Marina Wheelerနှင့် လက်ထပ်ခဲ့၏။ ၂၀၁၈၌ ၎င်းတို့နှစ်ဦး ကွာရှင်းရန် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ယခု ၂၀၁၉ တွင် အတူနေအဖော်ဖြစ် Carrie Symondsနှင့်အတူနေထိုင်လျက် ရှိသည်။
ဥပဒေပါရဂူ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ - Honorary degree of Doctor of Laws (LL.D) from Brunel University London, 2007
RIBA တက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးရာဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းဝင်ဘွဲ့ - Honorary Fellowship (academic) of the Royal Institute of British Architects(Hon FRIBA), 2011
ဩစတေးလျှနိုင်ငံသား တစ်နှစ်တာဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု - Honorary Australian of the Year, 26 January 2014
ယူကေဘုရင်မ၏ အကြံပေးအဖွဲ့ ပါဗီကောင်စီဝင် Member of Privy Council of the United Kingdom|Her Majesty's Most Honourable Privy Council, 2016, upon his appointment as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. This gave him the Honorific Title "The Right Honourable" for life.
↑ နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊ဘာသာရေးစသည်တို့တွင် ရှေးရိုးအစဉ်လာကိုထိမ်းသိမ်းသော ရပ်တည်ချက်ရှိသည့် ဝါဒ 
↑ လူမှုရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ဆောင်သောဝါဒ။ 
↑ Secular humanism isaphilosophy or life stance that embraces human reason, secular ethics, and philosophical naturalism while specifically rejecting religious dogma, supernaturalism, and superstition as the basis of morality and decision making.
↑ Uxbridge & South Ruislip။ BBC News။ 13 December 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Boris Johnson among record number to renounce American citizenship in 2016 (9 February 2017)။ 10 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Boris Johnson and wife to divorce"၊ BBC News၊7September 2018။ 10 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Carrie Symonds: Who is Boris Johnson's partner? (22 June 2019)။
↑ "Boris Johnson refuses to say how many children he has in live radio interview"၊ The Independent၊ 29 November 2019။ 29 November 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Johnson dodges LBC radio host's questions about his children"၊ The Guardian၊ 29 November 2019။ 29 November 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boris Johnson"။ Who Do You Think You Are?။ 20 August 2008။ BBC။
↑ Conservatism at en.wikipedia.com
↑ Cultural liberalism at en.wikipedia.com
↑ "Boris Johnson's Chaotic Path to Power Finally Pays Off" (in en-US)၊ New York Times၊ 23 July 2019။ 15 January 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 July 2019။
↑ Purnell 2011, p. 10.
↑ Gimson 2012, p. 1.
↑ Gimson 2012, p. 2.
↑ Llewellyn Smith၊ Julia။ "Boris Johnson, by his mother Charlotte Johnson Wahl"၊ The Sunday Telegraph၊ 18 May 2008။7July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 August 2008။
↑ Purnell 2011, p. 11,25-25.
↑ Gimson 2012, p. 12-13.
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ Purnell 2011, p. 13.
↑ Edwards & Isaby 2008, p. 44.
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Gimson 2012, p. 14.
↑ Gimson 2012, p. 11.
↑ Gimson 2012, p. 18.
↑ Edwards & Isaby 2008, p. 45.
↑ Purnell 2011, p. 28.
↑ Gimson 2012, p. 17-18.
↑ Purnell 2011, p. 31.
↑ Johnson၊ Stanley။ "Stanley Johnson: Why I remainafan of Brussels"၊ The Daily Telegraph၊ 18 June 2016။
↑ Purnell 2011, pp. 47–48.
↑ Bunbury၊ Stephanie။ "Boris Johnson and the right to write"၊ The Sydney Morning Herald၊ 17 August 2013။
↑ Johnston၊ Chris။ "When Boris was just another Timbertop Rent-A-Pom"၊ The Border Mail၊ 15 July 2016။ 15 January 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 January 2018။
↑  Schott Music catalogue entry for AllegraeBoris
↑ Purnell 2011, p. 109.
↑ ၅၉.၀ ၅၉.၁ ၅၉.၂ Fletcher၊ Martin။ "The joke's over – how Boris Johnson is damaging Britain's global stature"၊ New Statesman၊4November 2017။7November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Purnell 2011, p. 115.
↑ Boris Johnson။ "If Blair's so good at running the Congo, let him stay there"၊ The Daily Telegraph၊ 10 January 2002။
↑ Boris Johnson။ "Getting our knickers inatwist over China"၊ The Daily Telegraph၊ 1 September 2005။
↑ Purnell 2011, p. 171.
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ Purnell 2011, pp. 173–176; Gimson 2012, pp. 117–123.
↑ ၈၂.၀ ၈၂.၁ Purnell 2011, p. 204.
↑ "Boris says sorry over 'blacks have lower IQs' article in the Spectator"၊ London Evening Standard၊2April 2008။ 30 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "No 10 denies Boris Johnson 'thigh squeeze' claim"၊ BBC News၊ 29 September 2019။ 29 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Perraudin၊ Frances။ "Boris Johnson claimed Islam put Muslim world 'centuries behind'"၊ The Guardian၊ 15 July 2019။ 27 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "BBC NEWS | Programmes | BBC Parliament | Impeachment in practice"၊ BBC၊2September 2004။
↑ "On your bike, Boris: Howard sacks Johnson over private life"၊ The Independent၊ 14 November 2004။ 12 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 December 2004။
↑ Jones၊ George။ "Boris Johnson to run for mayor"၊ 16 July 2007။ 17 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁၅.၀ ၁၁၅.၁ Purnell 2011, p. 327.
↑ Prince၊ Rosa။ "Boris Johnson: Legalise cannabis for pain relief" (in en-GB)၊ 24 April 2008။
↑ "Johnson wins London mayoral race"၊ BBC News၊3May 2008။3May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Watt၊ Nicholas။ "Johnson snatches Tories' biggest prize"၊3May 2008။ 1 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Mayor unveils plan to ban alcohol on the transport network" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Greater London Authority။6May 2008။ 13 May 2008 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Waugh၊ Paul။ "Boris plans to 'Oysterise' overground rail services by next May"၊ 12 May 2008။ 21 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London Underground in 24-hour plans as ticket offices shut"၊ BBC News၊ 21 November 2013။ 17 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mulholland၊ Hélène။ "Barack Obama gets backing from Boris Johnson"၊ The Guardian၊ 1 August 2008။ 1 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prince၊ Rosa။ "Boris Johnson backs Barack Obama as US President"၊ The Daily Telegraph၊ 1 August 2008။ 1 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5August 2008။
↑ "London mayor: Boris Johnson wins second term by tight margin5May 2012 Last updated at 01:35"၊ BBC News၊5May 2012။5May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boris Johnson on London 2012 Olympics tickets and transport"၊ The Guardian (video)၊ 30 July 2012။ 11 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London 2012: Boris Johnson says capital is prepared"၊ BBC News၊ 22 July 2012။ 11 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kampfner၊ John။ "The Churchill Factor review – Boris Johnson's flawed but fascinating take on his hero"၊3November 2014။ 14 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Purnell 2011, p. 446.
↑ de Peyer၊ Robin။ "Boris Johnson declares he will stand in Uxbridge and South Ruislip"၊ London Evening Standard၊ 26 August 2014။ 26 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnston၊ Chris။ "Boris Johnson selected to stand for Tories in Uxbridge and South Ruislip"၊ The Guardian၊ 12 September 2014။ 30 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bennett၊ Asa။ "Boris Johnson lacks the skills to be prime minister, says Tory chairman"၊ LondonlovesBusiness.com၊ 17 September 2012။ 8 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7October 2012။
↑ "Boris Johnson says UK is better off outside the EU"၊ BBC News၊ 21 February 2016။ 21 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wearden၊ Graeme။ "Pound hits seven-year low after Boris Johnson's Brexit decision"၊ 22 February 2016။ 22 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boris Johnson's most controversial foreign insults"၊ BBC Newsbeat၊ 14 July 2016။ 18 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "EU debate: Boris Johnson says Brexit will be 'Britain's independence day' as Ruth Davidson attacks 'lies' of Leave campaign in front of 6,000-strong Wembley audience"၊ The Daily Telegraph၊ 20 June 2016။
↑ "Boris Johnson's independence day claim nonsense, says David Cameron"၊ The Guardian၊ 22 June 2016။
↑ "Boris Johnson Favourite to replace David Cameron as PM after Brexit"၊ The Guardian၊ 24 June 2016။ 30 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cowburn၊ Ashley။ "Michael Gove's statement on running for Tory leadership against Boris Johnson"၊ 30 June 2016။
↑ "Boris Johnson rules himself out of Conservative leader race"၊ BBC News၊ 30 June 2016။ 30 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Witte၊ Griff။ "Stung byabetrayal, former London mayor Boris Johnson ends bid to lead Britain"၊ 30 June 2016။
↑ "Boris Johnson won't run for Prime Minister after Michael Gove enters race"၊ The Daily Telegraph၊ 30 June 2016။ 30 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hughes၊ Laura။ "Boris Johnson announces he will not run for Prime Minister as Michael Gove declares his bid after claiming his colleague 'cannot provide the leadership'"၊ 30 June 2016။
↑ "Boris Johnson endorses Andrea Leadsom in Tory leadership bid"၊4July 2016။
↑ ၁၆၄.၀ ၁၆၄.၁ Hutton၊ Robert။ "Boris Johnson Appointed U.K. Foreign Secretary in May Government"၊ Bloomberg L.P.။
↑ Stephen Bush။ "Sending Boris Johnson to the Foreign Office is bad for Britain, good for Theresa May"၊ New Statesman၊ 14 July 2016။ 14 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thomas Hüetlin။ "Boris Johnson als Außenminister: Der Prügelknabe" (in German)၊ 14 July 2016။ 14 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ John Cassidy။ "The Huge Challenge Facing Theresa May"၊ 13 July 2016။ 14 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robert Moore။ "Boris Johnson's appointment as Foreign Secretary has not gone down well in the United States"၊ ITV News၊ 14 July 2016။ 14 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boris Johnson: UK will help Turkey join the EU"၊ Politico၊ 28 September 2016။
↑ "Boris Johnson urged to back probe into international law violations in Yemen"၊ The Independent၊ 21 September 2016။
↑ "Brexit and Gibraltar: May laughs off Spain 'war' talk"၊ BBC News၊3April 2017။
↑ "How would Boris Johnson solve the Irish border problem?"၊ New Statesman၊ 12 June 2019။
↑ "Ambassador stops Boris Johnson 'reciting colonial poem' in Burmese temple"၊ ITV၊ 30 September 2017။4November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Patrick Grafton-Green။ "Boris Johnson 'caught on camera quoting Kipling poem in Burmese temple'"၊ London Evening Standard၊ 30 September 2017။ 30 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Robert Booth။ "Boris Johnson caught on camera reciting Kipling in Myanmar temple"၊ The Guardian၊ 30 September 2017။4October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Kremlin conundrum facing Boris Johnson"၊ The Times၊ 23 July 2019။
↑ "What has Boris Johnson said about other countries and their leaders?"၊ BBC News၊ 24 July 2019။
↑ Wintour၊ Patrick။ "Boris Johnson compares Russian World Cup to Hitler's 1936 Olympics"၊ The Guardian၊ 21 March 2018။
↑ Osborne၊ Samuel။ "Sergei Skripal: Chemical weapons inspectors arrive in Salisbury to investigate nerve agent attack"၊ The Independent၊ 21 March 2018။
↑ "Boris Johnson joins US in criticising Russia to Germany gas pipeline"၊ The Guardian၊ 22 May 2018။
↑ Direct Cargo Flights from Dhaka: UK to lift ban shortly။ The Daily Star (10 February 2018)။ 22 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnson၊ Boris။ "My vision forabold, thriving Britain enabled by Brexit"၊ The Daily Telegraph၊ 15 September 2017။
↑ "Boris Johnson denies plot to topple UK PM Theresa May"။ 11 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 June 2017။
↑ "Boris Johnson under fire after calling Trump's Jerusalem embassy movea'moment of opportunity' for peace"၊ The Independent၊ 23 January 2018။
↑ "Johnson confirms bid for Tory leadership"၊ BBC News၊ 16 May 2019။ 28 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Johnson would be excellent leader – Trump"၊ BBC News၊ 1 June 2019။
↑ Full text: Boris Johnson launches his Tory leadership campaign (12 June 2019)။
↑ "Hunt to face Johnson in Tory leader race"၊ BBC News၊ 20 June 2019။
↑ Stewart၊ Heather။ "Boris Johnson elected new Tory leader"၊ The Guardian၊ 23 July 2019။ 23 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boris Johnson Becomes First US born Prime Minister of Britain"၊ 23 July 2019။
↑ "Who are Boris Johnson's key advisers?"၊ BBC News၊ 30 July 2019။
↑ Sparrow၊ Andrew။ "Boris Johnson cabinet: Sajid Javid, Priti Patel and Dominic Raab given top jobs – live news"၊ 24 July 2019။
↑ Elgot၊ Jessica။ "Boris Johnson asks Queen to suspend parliament" (in en-GB)၊ The Guardian၊ 28 August 2019။
↑ "Brexit: Queen consents to suspension of parliament for five weeks – live news"၊ The Guardian၊ 28 August 2019။
↑ "'A very British coup': How Europe reacted to Boris Johnson suspending parliament in Brexit push"၊ The Telegraph၊ 29 August 2019။2September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Parliament suspension: Thousands protest across the UK"၊ BBC၊ 31 August 2019။2September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "From Bodmin to Berlin, crowds vent their fury at Boris Johnson's 'coup'"၊ The Observer၊ 31 August 2019။2September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Factbox: UK government ensnared in court battles over suspending parliament"၊ Reuters၊ 30 August 2019။2September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Scottish judges rule Boris Johnson's prorogation unlawful"၊ The Guardian၊ 11 September 2019။ 11 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Brexit: Scottish judges rule Parliament suspension is unlawful"၊ BBC News၊ 11 September 2019။ 11 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnson denies lying to queen; court rejects Brexit case (12 September 2019)။ 12 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bowcott၊ Owen။ "Boris Johnson's suspension of parliament unlawful, supreme court rules"၊ 24 September 2019။
↑ "Supreme Court: Suspending Parliament was unlawful, judges rule"၊ 24 September 2019။
↑ Rayner၊ Gordon။ "Brexit vote result: Boris Johnson demands general election after rebel MPs seize control of Commons agenda" (in en-GB)၊ The Telegraph၊3September 2019။
↑ "MPs back bill aimed at blocking no-deal Brexit" (in en-GB)၊4September 2019။
↑ "Johnson's call for general election rejected by MPs" (in en-GB)၊4September 2019။
↑ ၂၀၇.၀ ၂၀၇.၁ "Boris Johnson: Does his cabinet reflect 'modern Britain'?"၊ BBC News၊ 25 July 2019။ 25 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Murphy၊ Sean။ "Boris Johnson gives himself 'Minister for the Union' title"၊ 26 July 2019။ 27 July 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "'Pro-China' Boris Johnson 'enthusiastic' about belt and road plan"၊ Yahoo News၊ 24 July 2019။
↑ "Britain joins Germany in criticizing Macron's Mercosur threat"၊ 24 August 2019။
↑ "Amazon fires spark European rift at G7 over Mercosur trade deal"၊ Deutsche Welle၊ 24 August 2019။
↑ "Boris Johnson loses majority after Tory MP defects during speech" (in en)၊ The Independent၊3September 2019။3September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Twenty-one Tory rebels lose party whip after backing bid to block no-deal Brexit (in en) (4 September 2019)။
↑ Restoration of Conservative Whip (29 October 2019)။
↑ "General Election 2019: What's behind the Conservative victory?"၊ BBC။
↑ Brogan၊ Benedict။ "Boris Johnson interview: My advice to David Cameron? I've made savings, so can you"၊ The Daily Telegraph၊ 29 April 2010။ 26 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 December 2016။
↑ Parker၊ George။ "Boris Johnson aims to win back voters as 'One Nation Tory'"၊ Financial Times၊ 21 December 2014။
↑ Hill၊ Dave။ "Mayor Boris, the liberal"၊ The Guardian၊ London, England: Guardian Media Group၊4December 2008။ Archived from the original on 11 November 2018။
↑ "Generation Boris"၊ The Economist၊ 1 June 2013။ Archived from the original on3January 2015။
↑ Bourne၊ Ryan။ "Don't lump Boris Johnson together with Donald Trump"၊ The Washington Post၊ 23 July 2019။
↑ Hinsliff၊ Gaby။ "Want to stop Johnson? More Tories should follow Heseltine and join the resistance"၊ The Guardian၊ 21 May 2019။
↑ Heseltine၊ Michael။ "Boris Johnson has no right to call himselfaone-nation Conservative"၊ The Guardian၊ 12 September 2019။
↑ "Winston Churchill: Theresa May says she has portrait of wartime PM in her study amid row over John McDonnell comments"၊ The Independent၊ 14 February 2019။ 26 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 February 2019။
↑ ၂၂၅.၀ ၂၂၅.၁ ၂၂၅.၂ Bienkov၊ Adam (14 February 2018)။ All the times Boris Johnson has contradicted his own arguments for Brexit။
↑ "Boris Johnson reopens post-Brexit immigration debate"၊ Bloomberg၊ 23 May 2018။ 25 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Britain's Boris Johnson Appeals To EU To Drop 'Irish Backstop' Demand။ kcbx.org။ 20 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnson says Britain will not pay Brussels for no-deal Brexit။ New Europe (27 August 2019)။ 27 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The BoJo, Ken and Bri show"၊ New Statesman၊6September 2007။7July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5December 2007။
↑ Crines 2013, p. 1.
↑ Purnell 2011, p. 3.
↑ Watt၊ Holly။ "Boris Johnson could be hit with six-figure tax bill"၊ 20 November 2014။ 21 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Siddique၊ Haroon။ "New York-born London mayor Boris Johnson refuses to pay US tax bill"၊ 20 November 2014။ 21 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London Mayor Boris Johnson agrees to pay US tax bill"၊ BBC News၊ 22 January 2015။ 15 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Crikey! Boris gives up White House to bid for No 10"၊ The Sunday Times၊ 15 February 2015။ 15 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 February 2017။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ "Мэр Лондона намерен отказаться от гражданства США" (in ru)၊ 15 February 2015။ 15 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sanderson၊ Terry။ "Who would Jesus vote for?"၊ The Guardian၊ 26 April 2008။
↑ Swinford၊ Steven။ "Boris Johnson: I am notaserious practicing Christian"၊ The Telegraph၊ 29 January 2015။
↑ Hobson၊ Theo။ "What I learned talking to Boris Johnson about religion"၊ The Spectator၊4August 2019။
↑ Helyer-Donaldson၊ Rachel။ "Boris Johnson's first wife marries again"၊ The Week။4May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 May 2016။
↑ Doward၊ Jamie။ "No dumb blond"၊ The Observer၊ 29 August 2004။7July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Honorary Graduates။ Brunel University London။6October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ RIBA Honorary Fellowships 2018 announced။ 11 Nov 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The lifetime honour allows recipients to use the initials Hon FRIBA after their name.”
↑ Fulcher၊ Merlin။ "Boris Johnson scoops RIBA honorary fellowship"၊ Architects Journal၊6December 2011။6October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London mayor Boris Johnson named honorary Australian of the Year"၊ 26 January 2014။6October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Crines, Andrew S. (2013). "Why did Boris Johnson win the 2012 mayoral election?". Public Policy and Administration Research3(9): 1–7.
Edwards၊ Giles; Isaby၊ Jonathan (2008)။ Boris v. Ken: How Boris Johnson Won London။ London: Politico's။ ISBN 978-1842752258။ CS1 maint: ref=harv (link)
Gimson၊ Andrew (2012)။ Boris: The Rise of Boris Johnson (second ed.)။ Simon & Schuster။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hill၊ Dave (2016)။ Zac Versus Sadiq: The Fight to Become London Mayor။ Not specified: Double Q။ ISBN 978-1-911079-20-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hosken၊ Andrew (2008)။ Ken: The Ups and Downs of Ken Livingstone။ Arcadia Books။ ISBN 978-1-905147-72-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Johnson၊ Stanley (2009)။ Stanley I Presume။ London: Fourth Estate။ ISBN 978-0007296736။
Purnell၊ Sonia (2011)။ Just Boris: Boris Johnson: The Irresistible Rise ofaPolitical Celebrity။ London: Aurum Press Ltd။ ISBN 978-1-84513-665-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘောရစ်_ဂျွန်ဆင်&oldid=741562" မှ ရယူရန်
September 2019 မှ မပြည့်စုံသေးသည့် စာရင်းများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။